3001s पास्टर रिक वारेनसँग &quot;एक विश्वास जुन कठिनाइहरूलाई सम्हाल्छ&quot; images and subtitles
- नमस्ते, सबैजना, म रिक वारेन हुँ, सद्लेब्याक चर्च मा लेखक र लेखक को "उद्देश्य संचालित जीवन" र स्पिकर "दैनिक आशा" कार्यक्रममा। यस प्रसारणमा ट्युनिका लागि धन्यवाद। तपाईंलाई थाहा छ, यस हप्ता यहाँ अरन्ज काउन्टी, क्यालिफोर्निया, सरकारले उनीहरूले प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्‍यो कुनै पनि आकारको सबै प्रकारका बैठकहरू महिनाको अन्त्य सम्म। त्यसो भए घरमा स्याडलब्याक चर्चमा स्वागत छ। मलाई खुशी छ तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ। र म तपाईंलाई एक भिडियो द्वारा सिकाउने छु अहिले र जब यो यो COVID-19 संकट समाप्त हुन्छ। त्यसो भए घरमा स्याडलब्याक चर्चमा स्वागत छ। र म तपाईंलाई हरेक हप्ता मेरो अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्न चाहन्छु, ती आराधना सेवाहरु को एक साथ भाग हुन। हामी सँगै संगीत र पूजा गर्ने छौं र म परमेश्वरको वचनबाट एक शब्द पठाउँदैछु। तपाईलाई थाहा छ, जस्तो कि मैले यस बारेमा सोचें, खैर, पहिले मैले तपाईंलाई भन्नु पर्छ। मैले महसुस गरे कि उनीहरूले हामीलाई बैठक रद्द गर्ने छन्। र यस हप्ता, मसँग सेडलब्याक स्टुडियो थियो मेरो ग्यारेजमा सारियो। म वास्तवमा यसलाई मेरो ग्यारेजमा ट्याप गर्दैछु। मेरो कंकाल टेक चालक दल भित्र आउनुहोस्, साथीहरू, सबैलाई नमस्ते भन्नुहोस्। (हाँसो) तिनीहरूले यसलाई यहाँ सार्न मद्दत गरे र सबै सेट अप गरे ताकि हामी तपाईसँग साप्ताहिक रुपमा कुरा गर्न सक्दछौं। अब, हामीले के कभर गर्नु पर्छ भनेर मैले सोचें यस COVID-19 संकटको समयमा, मैले तुरुन्तै जेम्सको किताबको बारेमा सोचेँ। जेम्सको पुस्तक एकदम सानो पुस्तक हो नयाँ नियमको अन्त नजिकै। तर यो धेरै व्यावहारिक छ र यो निकै सहयोगी छ, र म यो पुस्तकलाई विश्वास भन्छु जब जीवनले काम गर्दैन। र मैले सोचें कि यदि अहिले केहि पनि आवश्यक भए, के हामीलाई विश्वासको खाँचो छ जब जीवनले काम गर्दैन। किनकि यो अहिले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। र यसैले आज, यस हप्ता, हामी सुरु गर्दै छौं सँगै एक यात्रा जुन तपाईंलाई प्रोत्साहन दिन छ यो स through्कटको माध्यमबाट। र म चाहन्न कि तपाईं यी सन्देशहरू मध्ये कुनै पनि सम्झनुहोस्। किनभने जेम्सको पुस्तकले वास्तवमा १ major ठूलालाई कभर गर्दछ जीवनको ब्लक निर्माण, जीवनको १ of प्रमुख मुद्दाहरू, १ areas क्षेत्र जुन तपाईं प्रत्येक एक तपाईंको जीवनमा पहिले नै यससँग व्यवहार गर्नुपर्‍यो, र तपाई भविष्यमा यसको सामना गर्नु पर्ने छ। उदाहरणको लागि, जेम्सको अध्याय एकमा, मलाई तपाईलाई पुस्तकको अलि अवलोकन दिनुहोस्। यो केवल चार अध्याय हो। पहिलो अध्याय, यसले पहिला कठिनाइहरूको बारेमा कुरा गर्छ। र हामी आज त्यसका बारे कुरा गर्ने छौं। तपाईंको समस्याहरूको लागि परमेश्वरको उद्देश्य के हो? त्यसो भए यसले छनौटहरूको बारेमा कुरा गर्छ। तपाईं कसरी आफ्नो मन बनाउने? तपाईंलाई कहिले थाहा हुन्छ कहिले बस्न, कहिले जाने? तपाइँलाई कसरी गर्ने थाहा छ, तपाईं कसरी निर्णय लिनुहुन्छ? र त्यसपछि यो प्रलोभनको बारेमा कुरा गर्दछ। र हामी हेर्नेछौं कि तपाईं कसरी आम प्रलोभनहरूलाई पराजित गर्नुहुन्छ तपाईंको जीवनमा जुन तपाईं असफल हुन को कारण जारी राख्नुहुन्छ। र त्यसपछि यो मार्गदर्शनको बारेमा कुरा गर्दछ। र यसले हामी कसरी बाइबलले आशिष पाउन सक्छौं भनेर छलफल गर्दछ। यो मात्र पढ्नुहोस्, तर यसलाई द्वारा आशीर्वाद प्राप्त। त्यो सबै अध्याय एक मा छ। र हामी ती हप्ताहरूमा हेर्नेछौं। अध्याय दुई सम्बन्धहरु को बारे मा कुरा गर्दछ। हामी तपाईका मान्छेहरूसँग कसरी राम्रो व्यवहार गर्छौं भनेर हेर्न हामी रूखका छौं। र मानिस घरमा बस्नु पर्नेसँग, परिवारमा सबै सँगै, बच्चाहरू र आमाहरू र बुबाहरू, र व्यक्तिहरू एक अर्काको स्नायुमा जान्छन्। यो सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सन्देश हुन जान्छ। त्यसोभए यसले विश्वासको कुरा गर्छ। तपाइँ भगवानलाई कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ जब तपाइँ यस्तो महसुस गर्नुहुन्न र जब चीजहरू गलत दिशामा जाँदैछन्? त्यो सबै अध्याय दुईमा छ। अध्याय तीन, हामी कुराकानीको बारेमा कुरा गर्ने छौं। कुराकानीको शक्ति। र यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण अंश हो बाइबलमा कसरी तपाईं आफ्नो मुख प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी संकटमा छौं वा छैन। र त्यसपछि यो मित्रताको बारेमा कुरा गर्दछ। र यसले हामीलाई धेरै व्यावहारिक जानकारी दिन्छ कसरी तपाईं बुद्धिमानी बनाउने मित्रता र बेवकूफ मित्रताबाट जोगिनुहोस्। त्यो अध्याय तीन हो। चौथो अध्याय द्वन्द्वमा छ। र चौथो अध्यायमा हामी कुरा गर्छौं तपाईं कसरी बहसबाट जोगिनुहुन्छ। र त्यो वास्तविक सहयोगी हुनेछ। जब तनाव बढ्दै र निराशा बढ्दै जान्छ, जब मानिसहरू काममा छैनन्, तपाईं कसरी बहसबाट जोगिनुहुन्छ? र त्यसपछि यसले अरूको न्याय गर्ने कुरा गर्दछ। तपाईं कसरी भगवान खेल्न छोड्नुहुन्छ? त्यसले हाम्रो जीवनमा धेरै शान्ति ल्याउँछ यदि हामी त्यो गर्न सक्छौं। र त्यसपछि यसले भविष्यको बारेमा कुरा गर्दछ। भविष्यको लागि तपाई कसरी योजना गर्नुहुन्छ? त्यो चौथो अध्यायमा छ। अब, अन्तिम अध्यायमा, पाँचौं अध्याय, मैले तपाईंलाई भनेको थिएँ त्यहाँ चार अध्यायहरू थिए, त्यहाँ वास्तवमा छ जेम्समा पाँच अध्यायहरू। हामी पैसाको बारेमा कुरा गर्ने छौं। र यसले तपाईको सम्पत्तीसँग कसरी बुद्धिमानी हुन सकिन्छ भनेर कुरा गर्दछ। र त्यसपछि हामी धैर्यता हेर्न जाँदैछौं। जब तपाईं ईश्वरलाई पर्खनुहुन्छ तब तपाईं के गर्नुहुन्छ? भित्र बस्न सब भन्दा गाह्रो कोठा जब तपाईं हतारमा हुनुहुन्छ र भगवानले गर्नुहुन्न भने प्रतिक्षालयमा छ। र त्यसपछि हामी प्रार्थनामा हेर्ने छौं, जुन हामीले हेर्ने अन्तिम सन्देश हो। तपाईं कसरी आफ्नो समस्याहरूको बारेमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ? बाइबल भन्छ प्रार्थना र उत्तरहरू प्राप्त गर्ने एक तरीका छ, र प्रार्थना नगर्ने एउटा तरिका छ। र हामी त्यसलाई हेरिरहेका छौं। आज, हामी केवल पहिलो छ वटा पदहरू हेर्ने छौं जेम्स को पुस्तक को। यदि तपाईंसँग बाइबल छैन भने म तपाईंलाई डाउनलोड गर्न चाहन्छु यस वेबसाइटको बाहिरी रूपरेखा, शिक्षण नोटहरू, किनकि हामी सबै पदहरू हेर्नेछौं तपाइँको रूपरेखा मा त्यहाँ छन्। जेम्स अध्याय एक, पहिलो छ पदहरू। र बाइबलले यो भन्छ जब यो कुरा तपाइँको समस्याहरूको सामना गर्न। पहिले, याकूब १: १ ले यो भन्छ। परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक याकूब, राष्ट्रहरूमा छरिएका १२ कुललाई अभिवादन छ। अब, म यहाँ एक मिनेट को लागी रोक्न र भन्न यो सब भन्दा अधोरेखित परिचय हो बाइबलको कुनै पनि पुस्तकको। किनकि तिमीलाई थाहा छ जेम्स को थिए? उहाँ येशूको सौतेनी भाइ हुनुहुन्थ्यो। तिमीले भन्न के खोजेको? यसको मतलब उहाँ मरियम र यूसुफको छोरा हुनुहुन्थ्यो। येशू केवल मरियमको छोरा हुनुहुन्थ्यो। उनी यूसुफको छोरा थिएनन् 'किनभने परमेश्वर येशूका पिता हुनुहुन्थ्यो। तर बाइबलले बताउँछ कि मेरी र यूसुफ पछि धेरै बच्चाहरू थिए, र हामीलाई तिनीहरूको नाम पनि दिन्छ। जेम्स इसाई थिएनन्। ऊ ख्रीष्टको अनुयायी थिएन। उनले विश्वास गरेनन् कि उनका सौतेनी भाइ मसीह हुन् येशूको सम्पूर्ण सेवकाईको दौडान। उहाँ संशयवादी हुनुहुन्थ्यो। र तपाईले त्यो आकृति लगाउनु हुन्छ, कान्छो भाई विश्वास गर्दैन एक जेठो भाईमा, राम्रो छ, त्यो धेरै सादा हुनेछ। कुन कुराले याकूबलाई येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने बनायो? पुनरुत्थान। जब येशू मृत्युबाट फर्केर आउनुभयो र वरिपरि घुम्नुभयो अरु 40० दिनसम्म र याकूबले उनलाई देखे, उनी एक विश्वासी भए र पछि नेता बने जेरूसलेमको चर्चमा। त्यसैले यदि कसैसँग नामहरू छोड्ने अधिकार छ भने, यो केटा हो। उसले भन्न सक्छ, जेम्स, येशू संग हुर्केका मान्छे। जेम्स, येशूका सौतेनी भाइ। जेम्स, येशूका सबैभन्दा राम्रा साथी हुर्कदै। ती प्रकारका चीजहरू, तर ऊ गर्दिन। उनी केवल परमेश्वरका सेवक याकूबलाई भने। ऊ रैंक तान्न सक्दैन, ऊ आफ्नो पेडिग्रीलाई बढावा दिदैन। तर पद दुई मा, उहाँ मा प्रवेश गर्न सुरु यो तपाईको समस्याहरुमा परमेश्वरको उद्देश्यको पहिलो मुद्दा हो। मलाई यो पढ्न दिनुहोस्। ऊ भन्छ, जब सबै प्रकारको परीक्षा हुन्छ आफ्नो जीवनमा भीड, ती घुसपैठिएर को रूप मा रिसाउन छैन, तर तिनीहरूलाई मित्रको रूपमा स्वागत छ। बुझ्नुहोस् कि तिनीहरू तपाईंको विश्वासको जाँच गर्न आएका छन्, र तपाईं मा सहनशीलता को गुणवत्ता उत्पादन गर्न। तर त्यो प्रक्रिया त्यो धीरज नभएसम्म अगाडि बढ्न दिनुहोस् पूर्ण विकसित छ, र तपाईं एक व्यक्ति बन्नुहुनेछ परिपक्व चरित्र र अखण्डताको कुनै कमजोर स्पटको साथ। फिलिप्स अनुवाद हो जेम्स अध्याय एक को, पद दुई देखि छ। अब, उहाँ भन्नुहुन्छ जब सबै प्रकारका परीक्षाहरू तपाईंको जीवनमा आउँदछन् र ती तपाईंको जीवनमा भीड, उनले भने, तिनीहरूलाई रिसाउन छैन घुसपैठाहरूको रूपमा, उनीहरूलाई मित्रको रूपमा स्वागत गर्नुहोस्। ऊ भन्छ, तपाईलाई समस्या भयो, खुशी हुनुहोस्। तपाईंले समस्या पाउनु भयो, रमाउनुहोस्। तपाईले समस्या पाउनु भयो, मुस्कुराउनु। अब मलाई थाहा छ तपाई के सोचिरहनु भएको छ। तिमी जान्छौ, के तिमी मलाई ठट्टा गर्दैछौ? म किन COVID-19 को बारे मा खुशी हुनुपर्छ? म किन मेरो जीवनमा यी परीक्षाहरूको स्वागत गर्छु? यो कसरी सम्भव छ? रखरखावको यो सम्पूर्ण दृष्टिकोणको लागि कुञ्जी एक संकट को बीचमा एक सकारात्मक दृष्टिकोण शब्द बोध हो, यो शब्द बोध हो। उनले भने, जब यो सबै प्रकारको परीक्षा हुन्छ आफ्नो जीवनमा भीड, ती घुसपैठिएर को रूप मा रिसाउन छैन, तर तिनीहरूलाई मित्रको रूपमा स्वागत गर्नुहोस्, र महसुस गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, तिनीहरू तपाईंको विश्वासको जाँच गर्न आएका छन्। र त्यसपछि उनी जान्छन्, यसले तिनीहरूको जीवनमा के उत्पादन गर्दछ। उसले यहाँ के भनिरहेको छ कि ह्यान्डल गर्नमा तपाईको सफलता छ हप्ताहरू जो यस अगाडि यस COVID-19 महामारीमा छन् यो अब संसारभरि हो, र अधिक र अधिक राष्ट्रहरू बन्द हुँदैछ, र तिनीहरू बन्द गर्दैछन् रेस्टुरेन्ट र तिनीहरूले स्टोरहरू बन्द गर्दैछन्, र उनीहरू स्कूलहरू बन्द गर्दैछन्, र तिनीहरूले चर्चहरू बन्द गर्दैछन्, र तिनीहरू कुनै पनि स्थान बन्द गर्दैछन् जहाँ मानिसहरू भेला हुँदैछन्, र जस्तै यहाँ ओरेन्ज काउन्टीमा, जहाँ हामीलाई यस महिना कसैसँग पनि भेट्न अनुमति छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ, यी समस्याहरू समाधान गर्नमा तपाईंको सफलता तपाइँको समझ द्वारा निर्धारित गरिनेछ। तपाईको समझबाट। र ती समस्याहरूप्रति तपाईंको दृष्टिकोणबाट। यो तपाइँले महसुस गर्नुहुन्छ, यो तपाइँलाई थाँहा छ। अब, यो अंश मा पहिलो कुरा म तपाईंलाई महसुस गर्न चाहान्छु के परमेश्वरले हामीलाई समस्याहरूको चार सम्झाउनीहरू दिनुहुन्छ? तपाईं यी लेख्न चाहानुहुन्छ। तपाईंको जीवनमा समस्याहरूको बारेमा चार रिमाइन्डरहरू, जसमा हामी अहिलेबाट आउने संकटहरू पनि सामेल छन्। पहिलो, उहाँ भन्छन, समस्याहरू अपरिहार्य हुन्छन्। समस्याहरू अपरिहार्य छन्। अब उसले कसरी भनेको छ? ऊ भन्छ, जब सबै प्रकारका परीक्षाहरू आउँदछन्। ऊ भन्दैन कि यदि सबै प्रकारका परीक्षाहरू आउँदछन्, ऊ कहिले भन्छन्। तपाईं यसमा भर पर्न सक्नुहुन्छ। यो स्वर्ग छैन जहाँ सबै कुरा पूर्ण छन्। यो पृथ्वी हो जहाँ सबै कुरा बिग्रिएको छ। र उसले भन्दै छ कि तपाईलाई समस्याहरू हुनेछ, तपाईलाई कठिनाइ हुनेछ, तपाई यसमा भर पर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं यसमा स्टक किन्न सक्नुहुन्छ। अब, जेम्सले एक्लो भनेको यो कुरा होईन। सबै बाइबल मार्फत यो भन्छ। येशूले संसारमा तपाईं परीक्षा हुनेछ भन्नुभयो र परीक्षा, र तपाईं कष्ट हुनेछ। उनले भने कि तपाईलाई जीवनमा समस्याहरू हुन गइरहेको छ। त्यसोभए हामी समस्याले गर्दा किन छक्क पर्छौं? पत्रुस भन्छन् अचम्म नमान जब तपाईं ज्वलन्त परीक्षणहरू मार्फत जानुहुन्छ। भनेजस्तो व्यवहार नगर्नुहोला यो केहि नयाँ हो। सबै जना कठिन समयमा गुजारा गर्दछन्। जीवन गाह्रो छ। यो स्वर्ग होइन, यो पृथ्वी हो। कसैको प्रतिरक्षा, कोही पनि एक्लोन्ट छैन, कसैको इन्सुलेट छैन, कसैलाई पनि छुट छैन। उनले भन्छन कि तपाईसँग समस्या छ किनभने ती अपरिहार्य छन्। तपाईंलाई थाहा छ, मलाई एक समय याद छ जब म कलेजमा थिएँ। धेरै वर्ष पहिले, म माध्यम थियो केही वास्तवमै गाह्रो समय। र मैले प्रार्थना गर्न थालें, मैले भने, "भगवान, मलाई धैर्य गर्नुहोस्।" र परीक्षणहरू राम्रो हुनुको सट्टा, तिनीहरू खराब भए। र मैले भने, "भगवान, मलाई साँच्चिकै धैर्यता चाहिन्छ," र समस्याहरू झन् झन् खराब हुँदै गयो। र मैले भने, "भगवान, मलाई साँच्चिकै धैर्यता चाहिन्छ," उनीहरू झन् झन् खराब हुँदै गए। के भइरहेको थियो? खैर, अन्ततः मैले महसुस गरे कि लगभग छ महिना पछि, म सुरु हुँदा भन्दा धेरै धैर्यवान थिएँ, जुन तरिकाले परमेश्वरले मलाई धैर्यता सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो ती कठिनाइहरूको बीचमा थियो। अब, समस्याहरू कुनै प्रकारको वैकल्पिक पाठ्यक्रम होइनन् जीवनमा लिनको लागि तपाईसँग छनौट छ। होईन, तिनीहरू आवश्यक छन्, तपाईं ती अप्ट आउट गर्न सक्नुहुन्न। जीवन स्कूलबाट स्नातक को लागी, तपाईं कठिन दस्तक को स्कूल मा जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईं समस्याहरू पार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, ती अपरिहार्य छन्। बाइबलले भनेको कुरा यही हो। बाइबलले समस्याहरूको बारेमा भन्छ दोस्रो कुरा यो हो। समस्याहरू चर हो, यसको मतलब तिनीहरू सबै समान हुँदैनन्। तपाईं एक पछि अर्को समान समस्या प्राप्त गर्नुहुन्न। तपाईं फरक व्यक्तिहरूको एक धेरै प्राप्त। तपाईले उनीहरूलाई मात्र प्राप्त गर्नुहुन्न, तर तपाई बिभिन्न वस्तुहरू पनि पाउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ जब तपाईं परीक्षण, जब तपाईं सबै प्रकारका समस्याहरू छन्। तपाइँ सर्कल लगाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाइँ नोटहरू लिइरहनुभएको छ भने। जब सबै प्रकारका परीक्षाहरू तपाईंको जीवनमा आउँदछन्। तिमीलाई थाहा छ, म माली हुँ, र मैले एक पटक अध्ययन गरेँ, र मैले पत्ता लगाए कि सरकार यहाँ छ संयुक्त राज्य अमेरिका मा वर्गीकृत छ २०5 विभिन्न प्रकारको झार। मलाई लाग्छ कि ती मध्ये %०% मेरो बगैंचामा बढ्छ। (हाँसो) म प्रायः सोच्छु कि जब म तरकारी खेती गर्दैछु, मैले वारेनको झार फार्ममा प्रवेश लिनु पर्छ। तर त्यहाँ धेरै प्रकारका झारहरू छन्, र त्यहाँ धेरै प्रकारका परीक्षणहरू छन्, त्यहाँ धेरै प्रकारका समस्याहरू छन्। तिनीहरू सबै आकारमा आउँछन्, तिनीहरू सबै आकारहरूमा आउँदछन्। त्यहाँ 31१ भन्दा बढी स्वादहरू छन्। यो शब्द यहाँ छ, सबै प्रकारका, जहाँ यो भन्छन् तपाईंको जीवनमा सबै प्रकारका परीक्षाहरू छन्, यो वास्तवमा ग्रीक मा मतलब भनेको बहुरंगी। अर्को शब्दमा, त्यहाँ तनाव को शेड्स को एक धेरै छन् तपाईंको जीवनमा, तपाईं यससँग सहमत हुनुहुन्छ? त्यहाँ धेरै तनाव को शेड छन्। तिनीहरू सबै एकै देखिँदैनन्। त्यहाँ वित्तीय तनाव छ, त्यहाँ सम्बन्ध तनाव छ, स्वास्थ्य तनाव छ, त्यहाँ शारीरिक तनाव छ, त्यहाँ समय तनाव छ। उसले भनिरहेको छ कि तिनीहरू सबै बिभिन्न रंगहरू हुन्। तर यदि तपाईं बाहिर हुनुहुन्छ र तपाईं कार किन्नुहुन्छ र तपाईं चाहनुहुन्छ एक अनुकूलन रंग, त्यसपछि तपाइँ यसको लागि कुर्नु पर्छ। र त्यसपछि जब यो बनाइन्छ, तब तपाईं आफ्नो अनुकूलन रंग पाउनुहुनेछ। यहाँ वास्तवमा शब्द प्रयोग गरिएको छ। यो एक अनुकूलन रंग हो, तपाईंको जीवनमा बहुरंगी परीक्षणहरू। भगवानले कुनै कारणको लागि अनुमति दिनुहुन्छ। तपाईंको केहि समस्याहरू वास्तवमै अनुकूलित बनाइएको हो। ती मध्ये केही हामी सबै एकसाथ अनुभव गरेका छौं, यो जस्तै, COVID-19। तर ऊ भन्दै छ कि समस्याहरू चर हो। र यसको मतलब भनेको के हो जुन ती गहिराईमा फरक हुन्छन्। अर्को शब्दहरुमा, तिनीहरू कत्ति गाह्रो आउँछन्। तिनीहरू फ्रिक्वेन्सीमा भिन्न हुन्छन्, र त्यो कति लामो हुन्छ। हामीलाई थाहा छैन यो कति लामो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन यो कति गाह्रो हुन्छ। अर्को दिन मैले एउटा संकेत देखें जुनले भने, "हरेक जीवनमा केही वर्षा पर्छ, "तर यो हास्यास्पद छ।" (हाँसो) र मलाई लाग्छ कि त्यो बाटो हो धेरै व्यक्ति अहिले अहिल्यै महसुस गरिरहेका छन्। यो हास्यास्पद छ। समस्याहरू अपरिहार्य छन् र ती परिवर्तनशील छन्। तेस्रो कुरा जेम्सले भन्छ त्यसैले हामी छक्क पर्दैनौं समस्याहरु अप्रत्याशित छन्। तिनीहरू अप्रत्याशित छन्। उसले भन्छ जब तपाईको जीवनमा परीक्षाको भीड हुन्छ, यदि तपाईं नोटहरू लिइरहनु भएको छ भने, उक्त वाक्यांशलाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्। ती तपाईंको जीवनमा भीड। हेर्नुहोस्, कुनै समस्या कहिले आउँदैन जब तपाईंलाई यसको आवश्यकता पर्छ वा जब तपाईंलाई यसको आवश्यक पर्दैन। यो आउँछ जब यो आउँछ। यो कारण हो यो समस्याको एक अंश। समस्याहरू सबैभन्दा inopportune समयमा आउँछन्। के तपाईंले कहिल्यै समस्या जस्तो महसुस गर्नुभएको छ? तपाईको जीवनमा आएको हो, तपाई अहिले जानुहुन्छ। साँच्चै, अब जस्तै? यहाँ सेडलब्याक चर्चमा हामी एउटा ठूलो अभियानमा थियौं भविष्यको बारेमा सपना देख्दै र अचानक कोरोनाभाइरस हिट। र म जाँदैछु, अहिले होइन। (चकल्स) अहिले होइन। तपाईं ढिलो हुँदा कहिले फ्लैट टायर भएको छ? तपाईं प्रशस्त टायर पाउनुहुन्न जब तपाईं प्रशस्त समय पाउनुभयो। तपाई कतै जानको लागि हतारमा हुनुहुन्छ। यो तपाईंको नयाँ पोशाकमा बच्चाले रोए जस्तै छ जस्तो कि तपाई महत्त्वपूर्ण साँझको सment्लग्नताको लागि बाहिर जानुहुन्छ। वा तपाइँ बोल्नु अघि तपाइँको प्यान्टहरू विभाजित गर्नुभयो। त्यो वास्तवमै मलाई एक पटक भयो धेरै समय अगाडि आइतवारमा। केहि मानिसहरु, उनीहरु एकदमै अधीर छन्, तिनीहरू घुम्ने ढोकाका लागि पर्खिन सक्दैनन्। उनीहरूसँग भर्खर मात्र थियो, उनीहरूले यो गर्नुपर्‍यो, उनीहरूले यो गर्नु पर्छ अब, तिनीहरूले अब यो गर्नु पर्छ। मलाई याद छ धेरै वर्ष अघि म जापानमा थिएँ, र म मेट्रोमा उभिरहेको थिएँ सबवेको लागि आइपुग्न, र जब यो खोलियो, ढोका खोलियो, र एक युवा जापानी मानिस तुरुन्तै म त्यहाँ उभिरहेको थियो प्रक्षेपण मुान् उल्टो। र मैले सोचें, किन मलाई, किन अब? तिनीहरू अप्रत्याशित छन्, तिनीहरू आउँछन् जब तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यकता पर्दैन। तपाईं विरलै आफ्नो जीवनमा समस्याहरूको भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ। अब नोटिस गर्नुहोस्, यसले भन्छ जब सबै प्रकारका परीक्षणहरू, कहिले, तिनीहरू अपरिहार्य छन्, सबै प्रकारका, तिनीहरू भ्यारीएबल छन्, तपाईंको जीवनमा भीड, तिनीहरू अप्रत्याशित छन्, उनले भन्छन् कि ती मानिसहरूलाई घुसपैठिको रूपमा रिसाउँदैनन्। ऊ यहाँ के भनिरहेछ? ठिक छ, म यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या छु। तर यहाँ बाइबलले समस्याहरूको बारेमा चौथो कुरा भन्छ। समस्याहरू उद्देश्यपूर्ण छन्। समस्याहरू उद्देश्यपूर्ण छन्। सबै कुरामा भगवानको उद्देश्य हुन्छ। हाम्रो जीवनमा हुने नराम्रा चीजहरू पनि, परमेश्वर तिनीहरूबाट राम्रो कुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ। भगवानले हरेक समस्याको कारण हुनुहुन्न। धेरै जसो समस्याहरू हामी आफैंमा गर्छौं। मान्छेहरू भन्छन्, किन मानिसहरू बिरामी हुन्छन्? ठिकै छ, एउटा कारण यो हो कि हामी परमेश्वरले हामीलाई अह्राउनुभएको काम गर्दैनौं। यदि हामीले भगवानले हामीलाई खाने कुरा खायौं भने, यदि हामी सुतेको जस्तै ईश्वरले हामीलाई आराम गर्न बताउनुहुन्छ, यदि भगवानले हामीलाई व्यायाम गर्न बताउनु भएको छ भने हामी व्यायाम गर्छौं भने, यदि हामीले नकारात्मक भावनाहरूलाई हाम्रो जीवनमा अनुमति दिएनौं भने जस्तो भगवानले भन्छ, यदि हामी परमेश्वरको आज्ञापालन गर्छौं भने, हामीसँग हाम्रा धेरैजसो समस्याहरू हुँदैनन्। अध्ययनहरूले देखाए कि स्वास्थ्य समस्याहरूको लगभग %०% यो देश मा, अमेरिका मा, के भनिन्छ द्वारा निम्त्याइएको हो पुरानो जीवन शैली छनौट। अर्को शब्दहरुमा, हामी केवल सही कुरा गर्दैनौं। हामी स्वस्थ चीज गर्दैनौं। हामी प्रायः स्वयं विनाशकारी काम गर्दछौं। तर के उसले यहाँ भनेको छ, समस्याहरु उद्देश्यपूर्ण छन्। ऊ भन्छ जब तपाईले समस्याको सामना गर्नु हुन्छ, महसुस गर्न को लागी तिनीहरू उत्पादन गर्न आउँछन्। सर्कल त्यो वाक्यांश, तिनीहरू उत्पादन गर्न आउँछन्। समस्या उत्पादक हुन सक्छ। अब, ती स्वत: उत्पादक छैनन्। यो COVID भाइरस, यदि मैले ठीक दिनमा प्रतिक्रिया दिएन भने, यसले मेरो जीवनमा कुनै ठूलो कुराको उत्पादन गर्दैन। तर यदि मैले सहि प्रतिक्रिया दिएँ भने, मेरो जीवनमा पनि सबैभन्दा नकारात्मक चीजहरू विकास र लाभ र आशिष् उत्पादन गर्न सक्छ, तपाईंको जीवन र मेरो जीवनमा। तिनीहरू उत्पादन गर्न आउँछन्। उहाँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि दु: ख र तनाव र दुःख, हो, र रोग पनि केहि हासिल गर्न सक्छ मानको यदि हामी यसलाई दिन्छौं। यो सबै हाम्रो छनौटमा छ, यो सबै हाम्रो मनोवृत्तिमा छ। भगवानले हाम्रो जीवनमा कठिनाइहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईं भन्नुहोस्, ठीक छ, उसले कसरी गर्छ? हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले समस्या र समस्याहरू कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? ठिक छ, सोध्नु भएकोमा धन्यवाद, किनकि अर्को खण्ड वा पदको अर्को भाग भन्छन् कि परमेश्वरले ती तीन तरिका प्रयोग गर्नुहुन्छ। तीन तरिकाहरू, भगवानहरू तपाईंको जीवनमा समस्याहरू तीन तरिकाहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम, समस्याहरूले मेरो विश्वासको जाँच गर्दछ। अब, तपाईंको विश्वास एक मांसपेशी जस्तै छ। मांसपेशीलाई बलियो बनाउन सकिदैन जबसम्म यो परिक्षण हुँदैन, जबसम्म यो तानिँदैन, जबसम्म यो दबाबमा राखिदैन। तपाईं केहि गर्नुभएर कडा मांसपेशीहरू विकास गर्नुहुन्न। तपाईं तिनीहरूलाई तानेर बलियो मांसपेशीहरू विकास गर्नुहोस् र उनीहरूलाई सुदृढ पार्दै र परीक्षण गर्दै र तिनीहरूलाई सीमामा धकेल्दै। त्यसैले उसले भनेको समस्याहरु मेरो विश्वासको परीक्षा गर्न आउँदैछ। उसले भन्छन कि उनीहरूले विश्वासको जाँच गर्न आएका थिए। अब, त्यो शब्दको परीक्षण त्यहाँै छ, त्यो एक शब्द हो बाइबल समयमा त्यो धातुलाई परिष्कृत गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो। र तपाई के गर्नुहुन्छ तपाई बहुमूल्य धातु लिनुहुन्छ जस्तै चाँदी वा सुन वा अरू केहि, र तपाईं यसलाई ठूलो भाँडोमा राख्नुहुनेछ, र तपाईंले यसलाई तातो पार्नुहुनेछ अत्यधिक उच्च तापमान, किन? उच्च तापमान मा, सबै अशुद्धताहरू जलाइन्छ। र केवल चीज मात्र बाँकी छ शुद्ध सुन वा शुद्ध चाँदी। त्यो परीक्षणको लागि युनानी शब्द हो। यो त सुकाउने आगो हो, जब परमेश्वरले तातो ताप राख्नुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा अनुमति दिन्छ, यसले महत्वपूर्ण चीजहरू जलाउँछ। तपाइँलाई थाहा छ केहि हप्तामा के हुनेछ? स्टफ जुन हामी सबैले सोचेका थिए वास्तवमै महत्त्वपूर्ण थियो, हामी साकारै छौं, हम्म, म संगै छु त्यो बिना नै ठीक छ। यो हाम्रो प्राथमिकताहरू पुनःक्रम गराउने छ, किनकि चीजहरू परिवर्तन हुँदैछन्। अब, समस्याहरूको क्लासिक उदाहरण समस्याहरूले तपाईंको विश्वासको जाँच गर्दछ बाइबलमा अय्यूबको बारेमा कथाहरू छन्। कार्यको बारेमा पूरा पुस्तक छ। तपाईंलाई थाहा छ, बाइबल बाइबलमा सब भन्दा धनी मान्छे थियो, र एकै दिनमा, उसले सबै थोक हरायो। उसले आफ्नो सबै परिवार गुमायो, उसले आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमायो, उसले आफ्ना सबै साथीहरू गुमायो, आतंककारीहरूले उसको परिवारलाई आक्रमण गरे, ऊ डरलाग्दो र अत्यन्तै पीडादायी रोग भयो त्यो निको हुन सकेन। ठीक छ, ऊ टर्मिनल हो। तर पनि परमेश्वर उसको विश्वासको जाँच गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र परमेश्वरले पछि उसलाई दोहोरो पुनर्स्थापित गर्नुभयो ठूलो परीक्षामा जानुभन्दा पहिले ऊसँग के थियो। एक समय मा मैले कतै लामो समय पहिले एउटा उद्धरण पढें त्यो मान्छे चिया झोला जस्तो हुन्छन्। तपाईलाई वास्तवमै थाहा छैन उनीहरूमा के छ जब सम्म तपाईं तिनीहरूलाई तातो पानीमा छोड्नुहुन्न। र त्यसोभए तपाईं उनीहरूको वास्तविक भित्र के देख्न सक्नुहुन्छ। के तपाईंले कहिल्यै ती तातो पानी दिनहरू मध्ये कुनै एक गर्नुभयो? तपाईंसँग कहिले पनि ती तातो पानी हप्ताहरू वा महिनाहरूमध्ये एक थियो? हामी अहिले तातो पानीको स्थितिमा छौं। र तपाईबाट बाहिर निस्किने कुरा भनेको तपाई भित्रको कुरा हो। यो टुथपेस्ट जस्तो छ। यदि मसँग टुथपेस्ट ट्यूब छ र म यसलाई धकेल्छु, के हुन आउँछ तपाईं भन्नुहोला, राम्रो, टुथपेस्ट। होइन, आवश्यक छैन। यसले बाहिर टुथपेस्ट भन्न सक्छ, तर यो marinara सॉस हुन सक्छ वा भित्र बदाम बटर वा मेयोनेज। के हुन्छ जब बाहिर आउँछ जब यो दबाव मा राखिएको छ यसमा जे छ त्यो हो। र अगाडि दिनहरूमा तपाईंले COVID भाइरससँग सम्झौता गर्दा, तपाईबाट बाहिर निस्किने भनेको तपाई भित्रको कुरा हो। र यदि तपाईं तीतोपनले भर्नुभयो भने, त्यो बाहिर आउँनेछ। र यदि तपाईं निराश हुनुहुन्छ, त्यो बाहिर आउँछ। र यदि तपाईं क्रोध वा चिन्ता वा दोषले भरिएको हुनुहुन्छ भने वा लाज वा असुरक्षा, त्यो बाहिर आउने छ। यदि तपाईं डरले भरिएको हुनुहुन्छ भने, जुन तपाईंको भित्रबाट हुन्छ के हुन्छ बाहिर आउन जब दबाव तपाईं मा दबिएको छ। र ऊ यहाँ हो भन्दै छ, ती समस्याहरूले मेरो विश्वासको परीक्षा गर्छ। तिमीलाई थाहा छ वर्षौं अगाडि मैले एउटा बूढा मान्छेलाई भेटेको थिएँ धेरै वर्ष पहिले पूर्वमा एउटा सम्मेलनमा। मलाई लाग्छ टेनेसी थियो। र ऊ, यस बुढो मान्छेले मलाई कसरी बिदा हुने बारे बतायो उनको जीवनको सबैभन्दा ठूलो फाइदा थियो। र मैले भने, "ठीक छ, म यो कथा सुन्न चाहन्छु। "मलाई यसको बारेमा सबै बताउनुहोस्।" र यो के थियो उसले काम गर्यो एक आरी मिलमा उसको जीवनको सबै। उहाँ आफ्नो जीवनको सबै एक काठपट्टी बनाउने थियो। तर एक दिन आर्थिक मन्दीको बेला, उसको मालिक भित्र आई र अचानक घोषणा गर्यो, "तपाईलाई निकालिएको छ"। र उसको सबै विशेषज्ञता ढोका बाहिर गयो। र उनलाई with० वर्षको उमेरमा एक श्रीमतीको साथ छोडियो र एक परिवार र उहाँ वरिपरि कुनै अन्य रोजगार अवसरहरू, र त्यहाँ मन्दी चलिरहेको थियो। उनी निराश भए र डराए। तपाईं कसैलाई अहिल्यै त्यस्तो लाग्न सक्छ। तपाईं पहिले नै बिछोडिएको हुन सक्छ। हुनसक्छ तपाई डराउनु भएको छ कि तपाई हुनुहुनेछ यो स during्कटको बेला बिछ्याइयो। र ऊ एकदम उदास थियो, ऊ एकदम डरायो। उनले भने, मैले यो लेखें, उनले भने, "मलाई मन पर्यो "मेरो जग्गा मबाट निकालिएको दिनमा गुफामा परेको थियो। "तर जब म घर गएको थिएँ, मैले मेरी पत्नीलाई के भयो भनें, "र उनले सोधिन्, 'त्यसोभए तिमी के गर्दैछौ?' "र मैले भनेँ, त्यसो भए पनि जब म बर्खास्त भएँ, "म गर्न गइरहेको छु म सँधै गर्न चाहन्थें। "एक बिल्डर बन्नुहोस्। "म हाम्रो घर धितो राख्दै छु "र म निर्माण व्यवसायमा जान्छु।" र उनले मलाई भने, "तपाईलाई थाहा छ, रिक, मेरो पहिलो उद्यम "दुई साना मोटेलहरूको निर्माण कार्य थियो।" त्यो उनले गरे। तर उनले भने, "पाँच बर्षभित्रमा म करोडपति भएँ।" त्यो मान्छेको नाम, त्यो मानिस जससँग म कुरा गर्दै थिएँ, वालेस जोनसन थियो, र त्यो व्यवसाय जुन उसले सुरु गर्यो हटाए पछि हलिडे इन्स भनिन्थ्यो। छुट्टी इन्स। वालेसले मलाई भने, "रिक, आज, यदि म पत्ता लगाउन सक्छु "मलाई निकाल्ने मानिस, म इमानदारीसाथ भन्छु "उसले गरेको कामको लागि उहाँलाई धन्यवाद।" त्यो समयमा जब यो भयो, मैले बुझिन किन मलाई बर्खास्त गरियो, मलाई किन झारियो। तर पछि मात्र मैले यो थाहा पाएँ कि त्यो परमेश्वरको अप्रत्याशित थियो र मलाई उनको छनौट को क्यारियर मा प्रवेश गर्न अचम्मको योजना। समस्याहरू उद्देश्यपूर्ण छन्। तिनीहरूको उद्देश्य छ। बुझ्नुहोस् तिनीहरू उत्पादन गर्न आउँछन्, र पहिलो चीजहरू मध्ये एक तिनीहरूले उत्पादन गर्दछन् ठूलो विश्वास, तिनीहरूले तपाईंको विश्वासको परीक्षा गर्छन्। नम्बर दुई, यहाँ समस्याहरूको दोस्रो फाइदा छ। समस्याहरूले मेरो धीरजको विकास गर्दछ। तिनीहरूले मेरो धीरजको विकास गर्छन्। यो वाक्यांश को अर्को भाग हो, यो भन्छ यी समस्याहरू धीरज विकास गर्न आउँछ। तिनीहरू तपाईंको जीवनमा धैर्यता विकास गर्दछन्। तपाईंको जीवनमा समस्याहरूको नतिजा के हुन्छ? रहिरहने शक्ति। यो शाब्दिक रूपमा दबाब चलाउने क्षमता हो। आज हामी यसलाई लचिलोपना भन्छौं। फिर्ता बाउन्स गर्ने क्षमता। र सबै बच्चाले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो गुणहरू मध्ये एक र प्रत्येक वयस्कले लचिलोपना सिक्नु पर्छ। किनकि सबै जना गिर्छन्, सबैले ठेस खाए, सबै जना कठिन समयमा पार हुन्छन्, सबैजना बिभिन्न समयमा बिरामी हुन्छन्। सबैको जीवनमा असफलता हुन्छ। यो तपाईं कसरी दबाब ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। धीरज, तपाईं जारी राख्नुहुन्छ र लागिरहन्छ। ठिक छ, तपाइँ त्यो गर्न कसरी सिक्नुहुन्छ? तपाईं कसरी दबाब नियन्त्रण गर्न सिक्नुहुन्छ? अनुभव को माध्यम बाट, कि एक मात्र तरीका हो। तपाई पाठ्यपुस्तकमा दबाब चलाउन सिक्नुहुन्न। तपाईं एक सेमिनार मा दबाव कसरी ह्यान्डल गर्न सिक्न छैन। तपाईं दबाबमा राखेर दबाब ह्यान्डल गर्न सिक्नुहुन्छ। र तपाईलाई के हो थाहा छैन जबसम्म तपाईं वास्तवमा त्यस्तो अवस्थामा राख्नुहुन्न। सेडलब्याक चर्च, १ 198 1१ को दोस्रो वर्षमा, म उदासीनताको दौरबाट गुज्रिरहेको छु जहाँ प्रत्येक एक हप्ता म राजीनामा गर्न चाहान्थे। र म हरेक आइतबार दिउँसो छोड्न चाहान्छु। र अझै, म मेरो जीवनमा गाह्रो समयबाट गुज्रिरहेको थियो, र अझै पनी म अर्कोको अगाडि एउटा खुट्टा राख्ने थिएँ भगवानको रूपमा, मलाई एक ठूलो चर्च बनाउन को लागी, तर भगवान, मलाई यस हप्ता मा प्राप्त गर्नुहोस्। र म छोड्दिन। मँ खुशी छु कि मैले हार मानेन। तर मँ अझै खुसी छु कि परमेश्वरले मलाई त्याग्नु भएन। किनभने त्यो एउटा परीक्षण थियो। र त्यो वर्षको परीक्षणको अवधिमा मैले केही आध्यात्मिक विकास गरें र सम्बन्ध र भावनात्मक र मानसिक शक्ति यसले मलाई वर्षौं पछि सबै प्रकारका बलहरू जुगल गर्न अनुमति दियो र सार्वजनिक आँखा मा भारी मात्रामा तनाव ह्यान्डल किनकि म त्यो बर्ष लाग्यो एक पछि अर्को कठिनाई बाहिर। तपाईंलाई थाहा छ, सुविधाको साथ अमेरिकाको प्रेम सम्बन्ध रहेको छ। हामी सुविधा मन पराउछौं। दिन र हप्ताहरूमा यो संकटमा त्यहाँ असुविधाजनक हुने धेरै चीजहरू छन्। असुविधाजनक र हामी आफैंलाई के गर्न जाँदैछौं जब सबै कुरा सहज छैन, जब तपाईं बस जारी राख्नुपर्दछ जब तपाइँलाई लागिरहेको महसुस गर्नुहुन्न। तपाईंलाई थाहा छ, ट्राइथ्लनको लक्ष्य वा म्याराथनको गोल वास्तवमै गतिको बारेमा होइन, तपाईं त्यहाँ कत्ति चाँडो पुग्नुहुन्छ, यो धैर्यको बारेमा बढी छ। के तपाइँ दौड समाप्त गर्नुहुन्छ? तपाईं त्यस्ता चीजहरूको लागि कसरी तयारी गर्नुहुन्छ? केवल उनीहरूको माध्यमबाट। त्यसोभए जब तपाईं अगाडि दिनहरूमा तन्काइनुहुन्छ, यसको बारेमा चिन्ता नगर, यसको बारेमा चिन्ता नगर। समस्याहरूले मेरो धीरजको विकास गर्दछ। समस्याहरूको उद्देश्य हुन्छ, ती उद्देश्यपूर्ण हुन्छन्। तेस्रो कुरा जुन जेम्सले हामीलाई समस्याहरूको बारेमा बताउँदछ हामी यो माध्यमबाट जान्छौं कि समस्याहरू मेरो चरित्रमा परिपक्व हुन्छन्। अनि उनले यसलाई याकूब अध्याय १ को पद in मा भने। उहाँ भन्छन् तर, प्रक्रिया जारी राख्नुहोस् जब सम्म तपाईं परिपक्व चरित्रको मानिस बन्न सक्नुहुन्न र कुनै कमजोर स्पट बिना इमानदारीता। के तपाई त्यो चाहानुहुन्न? के तपाई मानिसहरूलाई सुन्न मन पराउनुहुन्न, तपाईलाई थाहा छ, त्यो महिलाको चरित्रको कुनै कमजोर दाग छैन। त्यो मानिस, त्यो केटाको चरित्रमा कुनै कमजोर स्पट छैन। तपाईं कसरी त्यस्तो परिपक्व चरित्र पाउनुहुन्छ? प्रक्रिया हुन दिनुहोस् जबसम्म तपाईं व्यक्ति बन्नुहुन्न, पुरुष र महिला, परिपक्व चरित्र को र कुनै कमजोर स्पट बिना इमानदारीता। तपाईंलाई थाहा छ, त्यहाँ एउटा प्रसिद्ध अध्ययन गरिएको थियो धेरैले, धेरै वर्ष पहिले रूसमा जुन मलाई लेखेको याद छ, र यो कसरी फरक जीवन स्थिति को प्रभाव मा थियो दीर्घायु वा विभिन्न जनावरहरूको आयु प्रभावित। र यसैले तिनीहरूले केही जनावरहरू सहज जीवनमा राखे, र तिनीहरूले केही अन्य जनावरहरूलाई बढी कठिनमा राखे र कठोर वातावरण। र वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए कि जनावरहरू त्यो आरामदायक मा राखिएको थियो र सजिलो वातावरण, सर्तहरू, ती बस्ने अवस्था, वास्तवमा कमजोर भयो। किनकि परिस्थितिहरू यति सजिलो थिए, तिनीहरू कमजोर भए र अधिक रोग को लागी संवेदनशील। र जो आरामदायी अवस्थामा थिए उनीहरू चाँडै मरे जो अनुभव गर्न को लागी अनुमति थियो भन्दा जीवन को सामान्य कठिनाइहरु। त्यो रमाईलो छैन? के जनावरहरु को साँचो हो मलाई निश्चित छ हाम्रो चरित्र को पनि। र पश्चिमी संस्कृतिमा विशेष गरी आधुनिक संसारमा, हामीसंग यति सजिलो भएको छ धेरै मा। सुविधाजनक जीवन बिताउने। तपाईंको जीवनमा परमेश्वरको नम्बर एक गोल चरित्रमा तपाईं येशू ख्रीष्ट जस्तै बनाउनु हो। ख्रीष्ट जस्तै सोच्न, ख्रीष्ट जस्तै व्यवहार गर्न, ख्रीष्टको जस्तो जीवन बिताउन, ख्रीष्टको जस्तो प्रेम गर्न, ख्रीष्ट जस्तै सकारात्मक हुन। र यदि यो सत्य हो, र बाइबलले यसलाई बारम्बार भन्छ, त्यसो भए भगवानले तपाईंलाई उही चीजहरूमा लैजानुहुनेछ कि येशूले तपाईंको चरित्र बढ्न माध्यम जानुभयो। तिमीले भन्यौ, येशू कस्तो हुनुहुन्छ? येशू प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्यता र दयालु हुनुहुन्छ, आत्माको फल, ती सबै। र परमेश्वरले ती उत्पादन कसरी गर्नुहुन्छ? हामीलाई विपरीत परिस्थितिमा राखेर। हामी धैर्यता सिक्छौं जब हामी अधीर हुन लोभ्याउँछौं। हामी प्रेम सिक्छौं जब हामी बेवकूफ मानिसहरू वरिपरि राख्नु पर्छ। हामी शोकको बीचमा खुशी सिक्छौं। हामी प्रतीक्षा गर्न र यस प्रकारको धैर्य गर्न सिक्छौं जब हामी कुर्नु पर्छ। हामी दयालु हुन सिक्छौं जब हामी स्वार्थी हुन लोभ्याउँछौं। आगामी दिनहरूमा, यो धेरै लोभ्याउने छ केवल बन्करमा हन्कर गर्न, पछाडि तान्नुहोस्, र मैले भने, हामी हाम्रो ख्याल राख्छौं। म, म, र म, मेरो परिवार, हामी चार र अधिक र सबैलाई बिर्सनुहोस्। तर त्यसले तपाईको आत्मालाई संकुचन गर्नेछ। यदि तपाईं अरू व्यक्तिको बारेमा सोच्न थाल्नुहुन्छ भने र जो कमजोर छन् उनीहरूलाई सहयोग गर्दै, वृद्ध र ती प्रीक्सीटिंग सर्तहरूको साथ, र यदि तपाईं पुग्नुहुनेछ, तपाईंको आत्मा बढ्नेछ, तपाईंको मुटु बढ्नेछ, तपाईं अझ राम्रो व्यक्ति हुनुहुनेछ यस संकटको अन्त्यमा तपाईं सुरूमा भन्दा ठीक छ, हो? हे भगवान, तपाईले आफ्नो चरित्र निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ, उसले दुईवटा चीजहरू प्रयोग गर्न सक्छ। उसले आफ्नो वचन प्रयोग गर्न सक्दछ, सत्यले हामीलाई परिवर्तन गर्दछ, र उसले परिस्थितिहरू प्रयोग गर्न सक्छ जुन अझ गाह्रो छ। अब, भगवानले बरु पहिलो तरीका, शब्द प्रयोग गर्नुहुनेछ। तर हामी सँधै वचन सुन्दैनौं, त्यसैले उसले हाम्रो ध्यान आकर्षण गर्न परिस्थितिहरू चलाउँछ। र यो अधिक गाह्रो छ, तर यो प्राय: प्रभावकारी हुन्छ। अब, तपाईं भन्नुहोस्, ठीक छ, रिक, मैले बुझें, कि समस्याहरू परिवर्तनशील छन् र ती उद्देश्यपूर्ण छन्, र तिनीहरू यहाँ छन् मेरो विश्वासको परीक्षण गर्न, र तिनीहरू हुनेछन् सबै बिभिन्न प्रकारका, र तिनीहरू आउँदैन जब म तिनीहरूलाई चाहान्छु। र भगवान मेरो चरित्र बढाउन र मेरो जीवन परिपक्व गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए म के गर्ने छु? अर्को केही दिन र हप्ताहरूमा र महिनौं अगाडि जब हामी सँगै यस कोरोनाभाइरसको संकटको सामना गर्दछौं, मैले मेरो जीवनमा समस्याहरूको जवाफ कसरी दिने? र म केवल भाइरसको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन। म समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु जुन परिणाम स्वरूप आउनेछ काम बाहिर वा बच्चाहरू घरमा हुनुहुन्छ वा अन्य सबै चीजहरू जुन जीवन विचलित हुन्छ यो सामान्य रूपमा भएको छ। मैले मेरो जीवनका समस्याहरूमा कसरी प्रतिक्रिया देखाउने? फेरि, जेम्स धेरै विशिष्ट छ, र उसले हामीलाई तीन धेरै व्यावहारिक दिन्छ, तिनीहरू कट्टरपन्थी प्रतिक्रियाहरू हुन्, तर तिनीहरू सही प्रतिक्रियाहरू हुन्। वास्तवमा, जब म तपाईलाई पहिलो कुरा भन्छु, तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईं मलाई मजाक गर्नु हुनेछ। तर त्यहाँ तीन प्रतिक्रियाहरू छन्, ती सबै आरबाट सुरू हुन्छन्। पहिलो प्रतिक्रिया उसले भन्छ जब तपाईं हुनुहुन्छ गाह्रो समयमा पार गर्दै, रमाउनुहोस्। तपाईं जानुहुन्छ, म ठट्टा गर्दैछु? त्यो masochistic लाग्छ। मैले समस्यामा रमाईलो गरिरहेको छैन। यो मात्र एक मिनेट मा मलाई पछ्याउनुहोस्। उसले भन्छ कि यो शुद्ध आनन्द विचार। यी समस्याहरूलाई मित्रको रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्। अब मलाई नबुझ्नुहोस्। उसले यो नक्कली भनिरहेको छैन। उसले प्लास्टिकको मुस्कानमा राखेको भनेको छैन, नाटक गर्नुहोस् कि सबै ठीकठाक छ र यो छैन, किनकि यो छैन। Pollyanna, सानो अनाथ एनी, सूर्य भोली बाहिर आउनेछ, यो भोली बाहिर आउन सक्दैन। ऊ वास्तविकतालाई अस्वीकार गरिरहेको छैन, होईन। उसले मासुचिस्ट हुन भनेको होइन। हे केटा, म दुखाइबाट गुज्रन्छु। ईश्वरले कष्टलाई तपाई जस्तो घृणा गर्नुहुन्छ। ओह, म दुखी हुन्छु, हे। र तपाईंसँग यो शहीद जटिल छ, र तपाईंलाई थाहा छ, ममा यो आध्यात्मिक अनुभूति हुन्छ जब मलाई खराब लाग्छ। होइन, होइन, होईन, भगवान तपाईं एक शहीद भएको चाहनुहुन्न। भगवान तपाईले पाएको चाहनुहुन्न दुखाइप्रति मास्कोटिस्टिक मनोवृत्ति। तपाईंलाई थाहा छ, मलाई याद छ म एक पटकबाट गुज्रिरहेको थिएँ वास्तवमै गाह्रो समय र साथी दयालु हुन खोज्दै थियो र तिनीहरूले भने, "तपाईंलाई थाहा छ, रिक, खुशी हो "किनभने परिस्थिति अझ खराब हुन सक्छ।" र के अनुमानित गर्नुहोस्, ती बढि खराब भयो। त्यो कुनै सहायता थिएन। म खुशी थिएँ र उनीहरू झन् खराब हुँदै गए। (चकल्स) त्यसोभए यो एक नक्कली Pollyanna सकारात्मक सोच को बारे मा छैन। यदि म उत्साहित कार्य गर्दछु, म उत्साहित हुनेछु। होइन, होइन, होईन, होईन, यो धेरै छ, यो भन्दा धेरै गहिराइ हो। हामी आनन्दित हुँदैनौं, सुन्नेछौं, हामी समस्याको लागि रमाउँदैनौं। हामी समस्यामा छौं, जब हामी समस्यामा छौं ,मा रमाउँछौं। रमाउनको लागि अझै धेरै चीजहरू छन्। समस्या आफै होइन, तर अन्य चीजहरू पनि जुन हामी समस्याहरूमा रमाउन सक्छौं। किन हामी समस्यामा रमाउन सक्छौं? 'किनकी हामीलाई थाहा छ यसको लागि एक उद्देश्य छ। किनकि हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर हामीलाई कहिले पनि छोडनुहुन्न। किनकि हामीलाई धेरै चीजहरू थाहा छ। हामीलाई थाहा छ कि भगवानको एक उद्देश्य छ। याद गर्नुहोस् उनले भनेका छन् यसलाई शुद्ध आनन्द मानेर। शब्दलाई गोलो लगाउनुहोस्। विचारको लागि जानाजानी आफ्नो दिमाग बनाउन को लागि मतलब गर्नुहोस्। तपाइँको मनोवृत्ति समायोजन भयो तपाईंले यहाँ बनाउनु भएको छ। के यो तपाईको रोजाई खुशी हो? भजन 34 34 पद एक मा, उनी भन्छन् म प्रत्येक पल्ट परमप्रभुलाई धन्यको भन्नेछु। सबै समयमा। र उसले भन्छ म गर्नेछु। यो इच्छाको छनौट हो, यो निर्णय हो। यो प्रतिबद्धता हो, यो एक विकल्प हो। अब, तपाई यस महिना अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ या त राम्रो मनोवृत्ति वा नराम्रो दृष्टिकोणको साथ। यदि तपाईंको मनोवृत्ति खराब छ भने, तपाईं आफैंलाई बनाउन लाग्नु भएको छ र तपाईको वरपर सबैजना दयनीय छ। तर यदि तपाइँको मनोवृत्ति राम्रो छ, तपाइँलाई रमाउन को लागी छनौट छ। तपाईं भन्नुहोस्, हामी उज्यालो पक्षमा हेरौं। आउनुहोस् ती चीजहरू खोजौं जुन हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौं। र हामी यो पनि महसुस गरौं कि नराम्रो अवस्थामा पनि, परमेश्वर खराबबाट राम्रो कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए मनोवृत्ति समायोजन गर्नुहोस्। म यस स in्कटमा कटु हुन सक्दिन। म यो स in्कटमा अझ राम्रो हुन सक्छु। मँ छनौट गर्न छु, यो मेरो रमाईलो विकल्प हो। ठीक छ, नम्बर दुई, दोस्रो आर अनुरोध छ। र त्यो ज्ञानको लागि परमेश्वरलाई सोध्नु हो। यो तपाईं के गर्न चाहानुहुन्छ जुनसुकै बेला तपाईं संकटमा हुनुहुन्छ। तपाईं भगवानसँग बुद्धिको लागि सोध्न चाहानुहुन्छ। गत हप्ता, यदि तपाईंले पछिल्लो हप्ताको सन्देश सुन्नुभयो भने, र यदि तपाईंले यो हराउनुभयो भने, अनलाइन फिर्ता जानुहोस् र त्यो सन्देश हेर्नुहोस् कुनै डर बिना भाइरस को उपत्यका को माध्यम बाट बनाउने मा। रमाइलो गर्न तपाईको छनौट हो, तर त्यसो भए तपाईले परमेश्वरबाट बुद्धिको लागि सोध्नु हुन्छ। र तपाईं बुद्धिको लागि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस् र तपाईं प्रार्थना गर्नुहुन्छ र तपाईं आफ्नो समस्याहरूको बारेमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ। पद सात मा यो एक याकूब मा भन्छन्। यदि यस प्रक्रियामा तपाईं मध्ये कसैलाई कसरी भेट्ने थाहा छैन कुनै खास समस्या, यो फिलिप्स अनुवादबाट बाहिर छ। यदि प्रक्रियामा तपाईं को कुनै पनि कसरी भेट्ने थाहा छैन कुनै खास समस्या तपाईले परमेश्वरलाई सोध्नु पर्छ उहाँ सबै मानिसहरूलाई उदारता दिनुहुन्छ उनीहरूलाई दोषी महसुस नगरीकन। र तपाई पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि आवश्यक ज्ञान तपाईंलाई दिइनेछ। तिनीहरू भन्छन् किन सबै चीजको लागि म ज्ञानको लागि सोध्छु समस्याको बिचमा? त्यसोभए तपाई यसबाट सिक्नुहोस्। त्यसोभए तपाईं समस्याबाट सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईं बुद्धि माग्नुहुन्छ। यो धेरै बढी सहयोगी छ यदि तपाईंले किन सोध्नुभयो भने, यो किन भइरहेको छ, र के भनेर सोध्नुहोस्, तपाईले मलाई के सिकाएको चाहानुहुन्छ? म के बन्न चाहन्छु? म योबाट कसरी बढ्न सक्छु? म कसरी राम्रो महिला बन्न सक्छु? म यो संकटबाट कसरी अझ राम्रो मानिस बन्न सक्छु? हो, म परिक्षण भइरहेको छु। म किनको बारेमा चिन्ता गर्दिन। किन वास्तवमै फरक पर्दैन। के महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, म के हुन गइरहेको छु र म यस अवस्थाबाट के सिक्न सक्छु? र त्यसो गर्नको लागि तपाईसँग बुद्धि माग्नु पर्छ। त्यसैले उसले भन्छ जब तपाईलाई बुद्धिको आवश्यकता पर्छ, भगवानलाई सोध्नुहोस्, भगवानले तपाईंलाई यो दिनुहुन्छ। त्यसोभए तिमी भन्छौ, भगवान, मलाई आमाको रूपमा बुद्धिको आवश्यकता छ। मेरा बच्चाहरु अर्को महिना को लागी घर जाँदैछन्। मलाई बुवाको जस्तो बुद्धिको आवश्यकता छ। म कसरी अग्रणी हुन्छ जब हाम्रो रोजगार संकटमा हुन्छ र म अहिले काम गर्न सक्दिन? बुद्धिको लागि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। नसोध्नुहोस् किन, तर के भनेर सोध्नुहोस्। त्यसोभए पहिले तपाईं रमाउनुहुन्छ, तपाईं सकारात्मक मनोवृत्ति पाउनुहुन्छ म भगवानलाई धन्यवाद दिन छु समस्याको लागि होइन, तर म समस्यामा भगवानलाई धन्यवाद दिन छु। किनभने जीवन राम्रो छ जब पनि परमेश्वरको राम्रो। यसैले म यस श्रृंखलालाई कल गर्दैछु "जीवन छैन जब काम गर्दछ वास्तविक विश्वास।" जब जीवनले काम गर्दैन। त्यसैले म रमाउँछु र अनुरोध गर्दछु। तेस्रो कुरा जेम्सले गर्न भने आराम गर्नुहोस्। हो, केवल थोडा चिल बाहिर, आफैलाई प्राप्त छैन सबै नसहरु को एक ढेर मा। तनावग्रस्त नहुनुहोस् तपाई केहि गर्न सक्नुहुन्न। भविष्यको बारेमा चिन्ता नगर। भगवान्‌ भन्छन् मँ तपाईको ख्याल राख्छु, मलाई विश्वास गर्नुहोस्। के उत्तम हो भनेर थाहा पाउन तपाई भगवानमा भरोसा राख्नुहुन्छ। तपाईं उसलाई सहयोग। तपाई सर्ट सर्किट गर्नुहुन्न जुन अवस्था तपाईले गुज्रिरहनु भएको छ। तर तपाईं केवल भगवान, भन्न, म आराम गर्न छु। म शंका गर्ने छैन। म शंका गर्ने छैन। म यस स्थितिमा तपाईलाई विश्वास गर्न वाला छु। पद आठ को अन्तिम पद छ हामी हेर्न छौं। ठिक छ, हामी एक मिनेट मा एक अर्को हेर्नेछौं। तर पद आठ भन्छ, तर तपाईं निष्कपट विश्वास मा सोध्नु पर्छ गोप्य श doubts्का बिना। इमान्दार विश्वासमा तपाई के माग्दै हुनुहुन्छ? बुद्धिको लागि सोध्नुहोस्। र भन्नुहोस्, भगवान, मलाई बुद्धिको आवश्यकता छ, र म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईं मलाई बुद्धि दिनुहुन्छ। म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईले मलाई बुद्धि दिनुहुन्छ। बाहिर फिक्री नगर्नुहोस्, शंका नगर्नुहोस्, तर यसलाई परमेश्वर समक्ष ल्याउनुहोस्। तपाईंलाई थाहा छ, बाइबल भन्छ, यसभन्दा अघि मैले औंल्याए कि यसले यी धेरै प्रकारका समस्याहरू भनेको छ। तपाईंलाई थाहा छ, हामी उनीहरूको बारेमा रंगीन रंगका बारे कुरा गर्छौं। धेरै, धेरै प्रकारका समस्याहरू। ग्रीकमा त्यो शब्द, धेरै प्रकारका समस्या, पहिलो पत्रुसले समेटिएको उही शब्द हो चौथो अध्याय, पद चार भनेर भने तपाईंलाई दिनुहुने थुप्रै प्रकारका अनुग्रह परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको धेरै प्रकारको अनुग्रह। यो समान बहुरंगी, बहु रंगीन, हीरा जस्तै हो। उसले त्यहाँ के भनिरहेछ? तपाईंसँग प्रत्येक समस्याको लागि, त्यहाँ उपलब्ध परमेश्वरको अनुग्रह छ। हरेक धेरै प्रकारको परीक्षण र स For्कष्टको लागि र कठिनाई, त्यहाँ एक प्रकारको अनुग्रह र दया छ र शक्ति जुन तपाइँले दिन चाहानुहुन्छ त्यो विशेष समस्या मेल गर्न। तपाईंलाई यसको लागि अनुग्रह चाहिन्छ, तपाईंलाई यसको लागि अनुग्रह चाहिन्छ, तपाईंलाई यसको लागि अनुग्रह चाहिन्छ। भगवान्‌ भन्छन् मेरो अनुग्रह बहुआयामी छ समस्याहरू जुन तपाईं सामना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसोभए म के भनिरहेछु? म भनिरहेछु कि तपाईको जीवनमा रहेका सबै समस्याहरू, यस COVID संकट सहित, शैतान भनेको यी समस्याहरु संग तपाइँलाई हराउन छ। तर ईश्वर यसको मतलब तपाईंलाई यी समस्याहरू मार्फत विकास गर्नु हो। ऊ शैतानलाई हराउन चाहन्छ, तर परमेश्वर तपाईंलाई विकास गर्न चाहानुहुन्छ। अब, तपाईको जीवनमा आउने समस्याहरू स्वचालित रूपमा तपाईलाई राम्रो व्यक्ति बनाउनुहुन्न। धेरै मानिसहरु उनीहरूबाट तीतो मान्छे हुन्छन्। यसले स्वचालित रूपमा तपाईलाई राम्रो व्यक्ति बनाउँदैन। यो तपाईंको दृष्टिकोण हो कि फरक पार्छ। र यहीँ म तपाईंलाई अर्को कुरा सम्झन चाहन्छु। नम्बर चार, सम्झन चौथो कुरा जब तपाईं समस्याहरूको माध्यमबाट जाँदै हुनुहुन्छ सम्झनु हो परमेश्‍वरका प्रतिज्ञाहरू। परमेश्‍वरका प्रतिज्ञाहरूलाई याद गर्नुहोस्। त्यो पद १२ मा तल छ। मलाई यो वाचा पढ्न दिनुहोस्। जेम्स अध्याय एक, पद १२ त्यो मानिस धन्यको हो, जसले परीक्षा अन्तर्गत स्थिर रहन्छ, किनभने जब ऊ परिक्षामा पुगेको छ, उसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई वचन छ। मलाई फेरि यो पढ्न दिनुहोस्। तपाईले यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु भएको म चाहन्छु। त्यो मानिस धन्यको हो, जसले परीक्षा अन्तर्गत स्थिर रहन्छ, कसले कठिनाइहरू सम्हाल्छ, जस्तो स्थिति हामी अहिलेमा छौं। त्यो मानिस धन्यको हो, जसले धैर्य धारण गर्छ, जसले धैर्य धारण गर्दछ, उहाँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ, जो परीक्षाहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ। किनभने जब ऊ परिक्षामा उभिन्छ, बाहिर आउँछ पछाडि, यो परीक्षण अन्तिम हुनेछ। यसको अन्त छ। तपाईं सुरुnelको अर्को छेउमा आउनुहुनेछ। तपाईंले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नुहुनेछ। ठिक छ, मलाई के पनि थाहा छैन कि यसको मतलब के हो, तर यो राम्रो छ। जीवनको मुकुट जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई। रमाइलो गर्न तपाईको छनौट हो। यो परमेश्वरको छनौटमा भरोसा गर्न तपाईको छनौट हो सन्देह गर्नुको सट्टा। तपाईंको अवस्थाबाट तपाईंलाई सहयोगको लागि बुद्धिको लागि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। र त्यसपछि विश्वासको सहनको लागि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। र भन्नुहोस्, भगवान, म हार मान्दिन। यो पनि पास हुनेछ। कसैलाई एकचोटि सोधिएको थियो, तपाईको मनपर्ने के हो? बाइबलको पद भने, यो भयो। र त्यसोभए तपाईंलाई किन यो पद मन पर्छ? किनभने जब समस्याहरू आउँदछन्, म जान्दछु तिनीहरू बस्न आएका छैनन्। तिनीहरू पारित भए। (चकल्स) र यो विशेष अवस्थामा यो सत्य हो। यो रहन आउँदैन, यो बित्न आउँदैछ। अब, म यो विचारबाट नजिक हुन चाहन्छु। एक संकट मात्र समस्या पैदा गर्दैन। यसले प्राय: तिनीहरूलाई प्रकट गर्दछ, प्राय: तिनीहरूलाई प्रकट गर्दछ। यो संकटले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा केही क्र्याकहरू प्रकट गर्न सक्छ। यो संकटले केहि क्र्याक्स प्रकट गर्न सक्छ परमेश्वरसँग तपाईंको सम्बन्धमा। यो संकटले तपाईंको जीवनशैलीमा केही क्र्याकहरू प्रकट गर्न सक्दछ, कि तपाईं तरिका आफैंलाई धेरै कठिन धकेल्दै हुनुहुन्छ। र त्यसैले भगवान तपाईं संग कुरा गर्न को लागी तयार हुनुहोस् तपाईको जीवनमा के परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, ठीक छ? यस हप्ताको बारेमा तपाईले सोच्न म चाहान्छु। र मलाई तपाईलाई केहि व्यावहारिक चरणहरू दिनुहोस्, ठीक छ? व्यावहारिक चरणहरू, पहिलो, म तपाईंलाई चाहन्छु यो सन्देश सुन्नको लागि कसैलाई प्रोत्साहित गर्न। के तपाईं त्यो गर्नुहुन्छ? के तपाईं यो लिंकलाई पास गर्नुहुनेछ र मित्रलाई पठाउनुहुनेछ? यदि यसले तपाईंलाई प्रोत्साहित गरेको छ भने, यसलाई पार गर्नुहोस्, र यस हप्ता एक प्रोत्साहनकर्ता बन्नुहोस्। तपाईको वरपरका सबैलाई यस संकटको बेला प्रोत्साहन चाहिन्छ। त्यसोभए उनीहरूलाई लिंक पठाउनुहोस्। दुई हप्ता अघि जब हाम्रो क्याम्पसमा चर्च थियो, लेक वन र हाम्रो सबै अन्य क्याम्पसहरूमा सेडलब्याकमा, करीव ,000०,००० मानिसहरूले चर्चमा देखाए। तर यो पछिल्लो हप्ता जब हामीले सेवाहरू रद्द गर्नुपर्‍यो र हामी सबैले अनलाइन हेर्नुपर्‍यो, मैले भने, सबै जना तपाईंको सानो समूहमा जान्छन् र छिमेकीहरूलाई आमन्त्रित गर्छन् र तपाईंको साथीहरूलाई तपाईंको सानो समूहमा आमन्त्रित गर्नुहोस्, हामीसँग १1१,००० थियो हाम्रो घर को ISPs सेवा मा जडान भयो। यसको मतलब साढे पाँच लाख मानिस हुन सक्छन् पछिल्लो हप्ताको सन्देश हेरियो। एक आधा लाख मानिस वा अधिक। किन, किनकि तपाईंले अरू कसैलाई हेर्न भन्नु भएको थियो। र म तपाईंलाई शुभ समाचारको साक्षी हुन प्रोत्साहित गर्न चाहन्छु यस हप्ता विश्वमा कि तपाईंलाई सख्त समाचार चाहिन्छ। मानिसहरूले यो सुन्नु पर्छ। लिंक पठाउनुहोस्। मलाई लाग्छ हामी यस हप्ता एक लाख मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छौं यदि हामी सबै सन्देशमा पास गर्छौं भने, ठीक छ? नम्बर दुई, यदि तपाईं सानो समूहमा हुनुहुन्छ भने हामी सक्दिनौं कम्तिमा यस महिनामा भेट्न सक्षम हुनुहोस्, त्यो निश्चितको लागि हो। र त्यसैले म तपाईंलाई भर्चुअल बैठक सेट अप गर्न प्रोत्साहित गर्दछु। तपाईंसँग एक अनलाइन समूह हुन सक्छ। तपाईं त्यो कसरी गर्नुहुन्छ? ठिक छ, त्यहाँ त्यहाँ उत्पादनहरू जूम जस्तै छन्। तपाई त्यो जाँच गर्न चाहानुहुन्छ, जुम, यो सित्तैं हो। र तपाइँ त्यहाँ पुग्न र जूम प्राप्त गर्न सबैलाई भन्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूको फोन वा कम्प्युटरमा, र तपाइँ छ वा आठ वा १० व्यक्ति जडान गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईं आफ्नो समूह जूम मा यस हप्ता गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाइँ एक अर्को अनुहार देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै फेसबुक लाइभ, वा यो केहि अरू जस्तै छ, तपाईंलाई थाहा छ, आईफोनमा के हुन्छ जब तपाईं फेसटाइममा हेर्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाई त्यो गर्न सक्नुहुन्न ठूलो समूहको साथ, तर तपाई यो एक व्यक्ति संग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैले प्रविधि मार्फत एक-अर्काको अनुहार आमने सामने जानुहोस्। हामीसँग अब टेक्नोलोजी छ जुन उपलब्ध थिएन। एउटा सानो समूह भर्चुअल समूह को लागी जुम जाँच गर्नुहोस्। र वास्तवमा यहाँ अनलाइन तपाईले केहि जानकारी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर तीन, यदि तपाईं सानो समूहमा हुनुहुन्न भने, म तपाईंलाई यस हप्ता एक अनलाइन समूहमा जान मद्दत गर्दछु, म गर्दछु। तपाईले गर्नुपर्ने सबै मलाई ईमेल गर्नुहोस्, PastorRick@saddleback.com। पादरी रिक @ काठी, एक शब्द, SADDLEBACK, saddleback.com, र म तपाईंलाई जडान गराउँछु एक अनलाइन समूहमा, ठीक छ? त्यसोभए यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि यदि तपाईं साडलब्याक चर्चको एक भाग हुनुहुन्छ तपाइँको दैनिक समाचार पत्र पढ्न जुन म पठाउँदै छु हरेक दिन यो संकटको समयमा। यसलाई "सेड्लब्याक एट होम" भनिन्छ। यसका सुझावहरू छन्, यसले प्रोत्साहनजनक सन्देशहरू पायो, यो समाचार छ कि तपाइँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै व्यावहारिक कुरा। हामी प्रत्येक दिन तपाइँसँग सम्पर्कमा रहन चाहन्छौं। "Homeddadback" प्राप्त गर्नुहोस्। यदि मसँग तपाईंको ईमेल ठेगाना छैन भने, त्यसोभए तपाईले बुझ्नुहुन्न। र तपाईं मलाई तपाईंको ईमेल ठेगाना ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ PastorRick@saddleback.com, र म तपाईंलाई सूचीमा राख्नेछु, र तपाईले दैनिक जडान पाउनुहुनेछ, दैनिक "होम मा काठी" न्यूजलेटर। मैले प्रार्थना गर्नु अघि म नजिक हुन चाहन्छु फेरि भनेर म तिमीलाई कती माया गर्छु। म हरेक दिन तपाईंको लागि प्रार्थना गर्दैछु, र म तपाइँको लागि प्रार्थना गरिरहने छु। हामी यस मार्फत प्राप्त गर्नेछौं। यो कथाको अन्त्य होइन। परमेश्वर अझै आफ्नो सिंहासनमा हुनुहुन्छ, र परमेश्वरले यसलाई प्रयोग गर्नुहुने छ तपाईंको विश्वास बढाउन, मानिसहरूलाई विश्वासमा ल्याउन। अनि कसलाई थाहा छ के हुन्छ। हामी यी सबैबाट आध्यात्मिक पुनरुद्धार पाउन सक्छौं किनकि प्रायः परमेश्वरतर्फ फर्कन्छ जब उनीहरू कठिन समयमा गुज्रिरहेका छन्। मलाई तिम्रो लागि प्रार्थना गरौं। बुबा, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कसले अहिले सुनिरहेको छ। हामी जेम्स अध्याय १ को सन्देश बाँच्न सक्छौं, पहिलो छ वा सात पदहरू। के हामी समस्याहरू आउन सक्छ भनेर जान्न सक्छौं, ती हुन जाँदैछन्, तिनीहरू भ्यारीएबल हुन्, तिनीहरू उद्देश्यपूर्ण छन्, र तपाईं सक्नुहुनेछ हाम्रो जीवनको लागि ती राम्रो प्रयोग गर्नुहोस् यदि हामी तपाईंलाई विश्वास गर्छौं। हामीलाई श doubt्का गर्न सहयोग गर्नुहोस्। हामीलाई रमाउन, अनुरोध गर्न प्रभु, र आफ्ना प्रतिज्ञाहरू सम्झन। र म सबैका लागि प्रार्थना गर्दछु कि उनीहरूको स्वस्थ हप्ता होस्। येशूको नाममा, आमेन। भगवानले तपाईलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, सबैलाई। यो अरू कसैलाई दिनुहोस्।
पास्टर रिक वारेनसँग &quot;एक विश्वास जुन कठिनाइहरूलाई सम्हाल्छ&quot;
< start="1.34" dur="1.42"> - नमस्ते, सबैजना, म रिक वारेन हुँ, >
< start="2.76" dur="1.6"> सद्लेब्याक चर्च मा लेखक र लेखक >
< start="4.36" dur="2.58"> को "उद्देश्य संचालित जीवन" र स्पिकर >
< start="6.94" dur="2.71"> "दैनिक आशा" कार्यक्रममा। >
< start="9.65" dur="2.53"> यस प्रसारणमा ट्युनिका लागि धन्यवाद। >
< start="12.18" dur="3.59"> तपाईंलाई थाहा छ, यस हप्ता यहाँ अरन्ज काउन्टी, क्यालिफोर्निया, >
< start="15.77" dur="2.47"> सरकारले उनीहरूले प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्‍यो >
< start="18.24" dur="4.19"> कुनै पनि आकारको सबै प्रकारका बैठकहरू >
< start="22.43" dur="1.46"> महिनाको अन्त्य सम्म। >
< start="23.89" dur="2.81"> त्यसो भए घरमा स्याडलब्याक चर्चमा स्वागत छ। >
< start="26.7" dur="1.41"> मलाई खुशी छ तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ। >
< start="28.11" dur="5"> र म तपाईंलाई एक भिडियो द्वारा सिकाउने छु >
< start="33.31" dur="4.59"> अहिले र जब यो यो COVID-19 संकट समाप्त हुन्छ। >
< start="37.9" dur="2.12"> त्यसो भए घरमा स्याडलब्याक चर्चमा स्वागत छ। >
< start="40.02" dur="3.34"> र म तपाईंलाई हरेक हप्ता मेरो अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्न चाहन्छु, >
< start="43.36" dur="2.25"> ती आराधना सेवाहरु को एक साथ भाग हुन। >
< start="45.61" dur="2.91"> हामी सँगै संगीत र पूजा गर्ने छौं >
< start="48.52" dur="2.44"> र म परमेश्वरको वचनबाट एक शब्द पठाउँदैछु। >
< start="50.96" dur="3.01"> तपाईलाई थाहा छ, जस्तो कि मैले यस बारेमा सोचें, >
< start="53.97" dur="2.15"> खैर, पहिले मैले तपाईंलाई भन्नु पर्छ। >
< start="56.12" dur="3.84"> मैले महसुस गरे कि उनीहरूले हामीलाई बैठक रद्द गर्ने छन्। >
< start="59.96" dur="3.6"> र यस हप्ता, मसँग सेडलब्याक स्टुडियो थियो >
< start="63.56" dur="1.32"> मेरो ग्यारेजमा सारियो। >
< start="64.88" dur="2.34"> म वास्तवमा यसलाई मेरो ग्यारेजमा ट्याप गर्दैछु। >
< start="67.22" dur="2.46"> मेरो कंकाल टेक चालक दल >
< start="69.68" dur="1.979"> भित्र आउनुहोस्, साथीहरू, सबैलाई नमस्ते भन्नुहोस्। >
< start="71.659" dur="2.101"> (हाँसो) >
< start="73.76" dur="3.12"> तिनीहरूले यसलाई यहाँ सार्न मद्दत गरे र सबै सेट अप गरे >
< start="76.88" dur="4.74"> ताकि हामी तपाईसँग साप्ताहिक रुपमा कुरा गर्न सक्दछौं। >
< start="81.62" dur="3.32"> अब, हामीले के कभर गर्नु पर्छ भनेर मैले सोचें >
< start="84.94" dur="3.22"> यस COVID-19 संकटको समयमा, >
< start="88.16" dur="2.98"> मैले तुरुन्तै जेम्सको किताबको बारेमा सोचेँ। >
< start="91.14" dur="2.67"> जेम्सको पुस्तक एकदम सानो पुस्तक हो >
< start="93.81" dur="2.15"> नयाँ नियमको अन्त नजिकै। >
< start="95.96" dur="3.81"> तर यो धेरै व्यावहारिक छ र यो निकै सहयोगी छ, >
< start="99.77" dur="5"> र म यो पुस्तकलाई विश्वास भन्छु जब जीवनले काम गर्दैन। >
< start="105.56" dur="3.67"> र मैले सोचें कि यदि अहिले केहि पनि आवश्यक भए, >
< start="109.23" dur="4.75"> के हामीलाई विश्वासको खाँचो छ जब जीवनले काम गर्दैन। >
< start="113.98" dur="2.86"> किनकि यो अहिले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। >
< start="116.84" dur="2.75"> र यसैले आज, यस हप्ता, हामी सुरु गर्दै छौं >
< start="119.59" dur="3.25"> सँगै एक यात्रा जुन तपाईंलाई प्रोत्साहन दिन छ >
< start="122.84" dur="1.03"> यो स through्कटको माध्यमबाट। >
< start="123.87" dur="3.22"> र म चाहन्न कि तपाईं यी सन्देशहरू मध्ये कुनै पनि सम्झनुहोस्। >
< start="127.09" dur="4.1"> किनभने जेम्सको पुस्तकले वास्तवमा १ major ठूलालाई कभर गर्दछ >
< start="131.19" dur="4.34"> जीवनको ब्लक निर्माण, जीवनको १ of प्रमुख मुद्दाहरू, >
< start="135.53" dur="3.76"> १ areas क्षेत्र जुन तपाईं प्रत्येक एक >
< start="139.29" dur="1.91"> तपाईंको जीवनमा पहिले नै यससँग व्यवहार गर्नुपर्‍यो, >
< start="141.2" dur="3.17"> र तपाई भविष्यमा यसको सामना गर्नु पर्ने छ। >
< start="144.37" dur="3.52"> उदाहरणको लागि, जेम्सको अध्याय एकमा, >
< start="147.89" dur="1.6"> मलाई तपाईलाई पुस्तकको अलि अवलोकन दिनुहोस्। >
< start="149.49" dur="1.42"> यो केवल चार अध्याय हो। >
< start="150.91" dur="2.99"> पहिलो अध्याय, यसले पहिला कठिनाइहरूको बारेमा कुरा गर्छ। >
< start="153.9" dur="1.77"> र हामी आज त्यसका बारे कुरा गर्ने छौं। >
< start="155.67" dur="4.13"> तपाईंको समस्याहरूको लागि परमेश्वरको उद्देश्य के हो? >
< start="159.8" dur="1.6"> त्यसो भए यसले छनौटहरूको बारेमा कुरा गर्छ। >
< start="161.4" dur="1.62"> तपाईं कसरी आफ्नो मन बनाउने? >
< start="163.02" dur="2.085"> तपाईंलाई कहिले थाहा हुन्छ कहिले बस्न, कहिले जाने? >
< start="165.105" dur="2.335"> तपाइँलाई कसरी गर्ने थाहा छ, तपाईं कसरी निर्णय लिनुहुन्छ? >
< start="167.44" dur="2.41"> र त्यसपछि यो प्रलोभनको बारेमा कुरा गर्दछ। >
< start="169.85" dur="3.29"> र हामी हेर्नेछौं कि तपाईं कसरी आम प्रलोभनहरूलाई पराजित गर्नुहुन्छ >
< start="173.14" dur="3.24"> तपाईंको जीवनमा जुन तपाईं असफल हुन को कारण जारी राख्नुहुन्छ। >
< start="176.38" dur="2.04"> र त्यसपछि यो मार्गदर्शनको बारेमा कुरा गर्दछ। >
< start="178.42" dur="2.68"> र यसले हामी कसरी बाइबलले आशिष पाउन सक्छौं भनेर छलफल गर्दछ। >
< start="181.1" dur="2.24"> यो मात्र पढ्नुहोस्, तर यसलाई द्वारा आशीर्वाद प्राप्त। >
< start="183.34" dur="1.56"> त्यो सबै अध्याय एक मा छ। >
< start="184.9" dur="2.36"> र हामी ती हप्ताहरूमा हेर्नेछौं। >
< start="187.26" dur="2.7"> अध्याय दुई सम्बन्धहरु को बारे मा कुरा गर्दछ। >
< start="189.96" dur="3.06"> हामी तपाईका मान्छेहरूसँग कसरी राम्रो व्यवहार गर्छौं भनेर हेर्न हामी रूखका छौं। >
< start="193.02" dur="2.628"> र मानिस घरमा बस्नु पर्नेसँग, >
< start="195.648" dur="4.242"> परिवारमा सबै सँगै, बच्चाहरू र आमाहरू र बुबाहरू, >
< start="199.89" dur="2.32"> र व्यक्तिहरू एक अर्काको स्नायुमा जान्छन्। >
< start="202.21" dur="2.74"> यो सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सन्देश हुन जान्छ। >
< start="204.95" dur="1.39"> त्यसोभए यसले विश्वासको कुरा गर्छ। >
< start="206.34" dur="4.76"> तपाइँ भगवानलाई कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ जब तपाइँ यस्तो महसुस गर्नुहुन्न >
< start="211.1" dur="2.18"> र जब चीजहरू गलत दिशामा जाँदैछन्? >
< start="213.28" dur="1.64"> त्यो सबै अध्याय दुईमा छ। >
< start="214.92" dur="3.32"> अध्याय तीन, हामी कुराकानीको बारेमा कुरा गर्ने छौं। >
< start="218.24" dur="1.66"> कुराकानीको शक्ति। >
< start="219.9" dur="2.12"> र यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण अंश हो >
< start="222.02" dur="3.73"> बाइबलमा कसरी तपाईं आफ्नो मुख प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। >
< start="225.75" dur="2.25"> यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी संकटमा छौं वा छैन। >
< start="228" dur="2.27"> र त्यसपछि यो मित्रताको बारेमा कुरा गर्दछ। >
< start="230.27" dur="2.21"> र यसले हामीलाई धेरै व्यावहारिक जानकारी दिन्छ >
< start="232.48" dur="2.71"> कसरी तपाईं बुद्धिमानी बनाउने मित्रता >
< start="235.19" dur="2.7"> र बेवकूफ मित्रताबाट जोगिनुहोस्। >
< start="237.89" dur="2.24"> त्यो अध्याय तीन हो। >
< start="240.13" dur="3.5"> चौथो अध्याय द्वन्द्वमा छ। >
< start="243.63" dur="2.39"> र चौथो अध्यायमा हामी कुरा गर्छौं >
< start="246.02" dur="1.88"> तपाईं कसरी बहसबाट जोगिनुहुन्छ। >
< start="247.9" dur="1.56"> र त्यो वास्तविक सहयोगी हुनेछ। >
< start="249.46" dur="2.78"> जब तनाव बढ्दै र निराशा बढ्दै जान्छ, >
< start="252.24" dur="2.94"> जब मानिसहरू काममा छैनन्, तपाईं कसरी बहसबाट जोगिनुहुन्छ? >
< start="255.18" dur="2.03"> र त्यसपछि यसले अरूको न्याय गर्ने कुरा गर्दछ। >
< start="257.21" dur="2.74"> तपाईं कसरी भगवान खेल्न छोड्नुहुन्छ? >
< start="259.95" dur="1.84"> त्यसले हाम्रो जीवनमा धेरै शान्ति ल्याउँछ >
< start="261.79" dur="1.08"> यदि हामी त्यो गर्न सक्छौं। >
< start="262.87" dur="1.67"> र त्यसपछि यसले भविष्यको बारेमा कुरा गर्दछ। >
< start="264.54" dur="1.82"> भविष्यको लागि तपाई कसरी योजना गर्नुहुन्छ? >
< start="266.36" dur="1.56"> त्यो चौथो अध्यायमा छ। >
< start="267.92" dur="2.75"> अब, अन्तिम अध्यायमा, पाँचौं अध्याय, मैले तपाईंलाई भनेको थिएँ >
< start="270.67" dur="0.98"> त्यहाँ चार अध्यायहरू थिए, त्यहाँ वास्तवमा छ >
< start="271.65" dur="1.683"> जेम्समा पाँच अध्यायहरू। >
< start="274.327" dur="2.243"> हामी पैसाको बारेमा कुरा गर्ने छौं। >
< start="276.57" dur="3.65"> र यसले तपाईको सम्पत्तीसँग कसरी बुद्धिमानी हुन सकिन्छ भनेर कुरा गर्दछ। >
< start="280.22" dur="1.73"> र त्यसपछि हामी धैर्यता हेर्न जाँदैछौं। >
< start="281.95" dur="3.26"> जब तपाईं ईश्वरलाई पर्खनुहुन्छ तब तपाईं के गर्नुहुन्छ? >
< start="285.21" dur="1.92"> भित्र बस्न सब भन्दा गाह्रो कोठा >
< start="287.13" dur="3.87"> जब तपाईं हतारमा हुनुहुन्छ र भगवानले गर्नुहुन्न भने प्रतिक्षालयमा छ। >
< start="291" dur="1.29"> र त्यसपछि हामी प्रार्थनामा हेर्ने छौं, >
< start="292.29" dur="2.07"> जुन हामीले हेर्ने अन्तिम सन्देश हो। >
< start="294.36" dur="1.94"> तपाईं कसरी आफ्नो समस्याहरूको बारेमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ? >
< start="296.3" dur="2.58"> बाइबल भन्छ प्रार्थना र उत्तरहरू प्राप्त गर्ने एक तरीका छ, >
< start="298.88" dur="2.29"> र प्रार्थना नगर्ने एउटा तरिका छ। >
< start="301.17" dur="1.27"> र हामी त्यसलाई हेरिरहेका छौं। >
< start="302.44" dur="3.763"> आज, हामी केवल पहिलो छ वटा पदहरू हेर्ने छौं >
< start="306.203" dur="2.072"> जेम्स को पुस्तक को। >
< start="308.275" dur="5"> यदि तपाईंसँग बाइबल छैन भने म तपाईंलाई डाउनलोड गर्न चाहन्छु >
< start="313.46" dur="3.73"> यस वेबसाइटको बाहिरी रूपरेखा, शिक्षण नोटहरू, >
< start="317.19" dur="2.02"> किनकि हामी सबै पदहरू हेर्नेछौं >
< start="319.21" dur="2.04"> तपाइँको रूपरेखा मा त्यहाँ छन्। >
< start="321.25" dur="3.22"> जेम्स अध्याय एक, पहिलो छ पदहरू। >
< start="324.47" dur="4.07"> र बाइबलले यो भन्छ जब यो कुरा >
< start="328.54" dur="2.33"> तपाइँको समस्याहरूको सामना गर्न। >
< start="330.87" dur="2.35"> पहिले, याकूब १: १ ले यो भन्छ। >
< start="333.22" dur="5"> परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक याकूब, >
< start="338.86" dur="4.18"> राष्ट्रहरूमा छरिएका १२ कुललाई अभिवादन छ। >
< start="343.04" dur="2.23"> अब, म यहाँ एक मिनेट को लागी रोक्न र भन्न >
< start="345.27" dur="2.95"> यो सब भन्दा अधोरेखित परिचय हो >
< start="348.22" dur="1.71"> बाइबलको कुनै पनि पुस्तकको। >
< start="349.93" dur="2.01"> किनकि तिमीलाई थाहा छ जेम्स को थिए? >
< start="351.94" dur="3.073"> उहाँ येशूको सौतेनी भाइ हुनुहुन्थ्यो। >
< start="355.013" dur="1.507"> तिमीले भन्न के खोजेको? >
< start="356.52" dur="2.19"> यसको मतलब उहाँ मरियम र यूसुफको छोरा हुनुहुन्थ्यो। >
< start="358.71" dur="2.899"> येशू केवल मरियमको छोरा हुनुहुन्थ्यो। >
< start="361.609" dur="4.591"> उनी यूसुफको छोरा थिएनन् 'किनभने परमेश्वर येशूका पिता हुनुहुन्थ्यो। >
< start="366.2" dur="2.47"> तर बाइबलले बताउँछ कि मेरी र यूसुफ >
< start="368.67" dur="3.52"> पछि धेरै बच्चाहरू थिए, र हामीलाई तिनीहरूको नाम पनि दिन्छ। >
< start="372.19" dur="2.87"> जेम्स इसाई थिएनन्। >
< start="375.06" dur="2.27"> ऊ ख्रीष्टको अनुयायी थिएन। >
< start="377.33" dur="3.54"> उनले विश्वास गरेनन् कि उनका सौतेनी भाइ मसीह हुन् >
< start="380.87" dur="1.78"> येशूको सम्पूर्ण सेवकाईको दौडान। >
< start="382.65" dur="1.29"> उहाँ संशयवादी हुनुहुन्थ्यो। >
< start="383.94" dur="3.14"> र तपाईले त्यो आकृति लगाउनु हुन्छ, कान्छो भाई विश्वास गर्दैन >
< start="387.08" dur="3.22"> एक जेठो भाईमा, राम्रो छ, त्यो धेरै सादा हुनेछ। >
< start="390.3" dur="3.81"> कुन कुराले याकूबलाई येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने बनायो? >
< start="394.11" dur="1.56"> पुनरुत्थान। >
< start="395.67" dur="4.42"> जब येशू मृत्युबाट फर्केर आउनुभयो र वरिपरि घुम्नुभयो >
< start="400.09" dur="1.96"> अरु 40० दिनसम्म र याकूबले उनलाई देखे, >
< start="402.05" dur="3.79"> उनी एक विश्वासी भए र पछि नेता बने >
< start="405.84" dur="2.09"> जेरूसलेमको चर्चमा। >
< start="407.93" dur="3.82"> त्यसैले यदि कसैसँग नामहरू छोड्ने अधिकार छ भने, यो केटा हो। >
< start="411.75" dur="4.06"> उसले भन्न सक्छ, जेम्स, येशू संग हुर्केका मान्छे। >
< start="415.81" dur="2.95"> जेम्स, येशूका सौतेनी भाइ। >
< start="418.76" dur="3.87"> जेम्स, येशूका सबैभन्दा राम्रा साथी हुर्कदै। >
< start="422.63" dur="1.47"> ती प्रकारका चीजहरू, तर ऊ गर्दिन। >
< start="424.1" dur="2.68"> उनी केवल परमेश्वरका सेवक याकूबलाई भने। >
< start="426.78" dur="4.97"> ऊ रैंक तान्न सक्दैन, ऊ आफ्नो पेडिग्रीलाई बढावा दिदैन। >
< start="431.75" dur="2.24"> तर पद दुई मा, उहाँ मा प्रवेश गर्न सुरु >
< start="433.99" dur="5"> यो तपाईको समस्याहरुमा परमेश्वरको उद्देश्यको पहिलो मुद्दा हो। >
< start="439.07" dur="1.86"> मलाई यो पढ्न दिनुहोस्। >
< start="440.93" dur="2.41"> ऊ भन्छ, जब सबै प्रकारको परीक्षा हुन्छ >
< start="444.2" dur="5"> आफ्नो जीवनमा भीड, ती घुसपैठिएर को रूप मा रिसाउन छैन, >
< start="449.52" dur="3.15"> तर तिनीहरूलाई मित्रको रूपमा स्वागत छ। >
< start="452.67" dur="2.82"> बुझ्नुहोस् कि तिनीहरू तपाईंको विश्वासको जाँच गर्न आएका छन्, >
< start="455.49" dur="4.8"> र तपाईं मा सहनशीलता को गुणवत्ता उत्पादन गर्न। >
< start="460.29" dur="4.32"> तर त्यो प्रक्रिया त्यो धीरज नभएसम्म अगाडि बढ्न दिनुहोस् >
< start="464.61" dur="5"> पूर्ण विकसित छ, र तपाईं एक व्यक्ति बन्नुहुनेछ >
< start="470.01" dur="5"> परिपक्व चरित्र र अखण्डताको >
< start="475.11" dur="2.71"> कुनै कमजोर स्पटको साथ। >
< start="477.82" dur="2.24"> फिलिप्स अनुवाद हो >
< start="480.06" dur="2.73"> जेम्स अध्याय एक को, पद दुई देखि छ। >
< start="482.79" dur="3.377"> अब, उहाँ भन्नुहुन्छ जब सबै प्रकारका परीक्षाहरू तपाईंको जीवनमा आउँदछन् >
< start="486.167" dur="2.963"> र ती तपाईंको जीवनमा भीड, उनले भने, तिनीहरूलाई रिसाउन छैन >
< start="489.13" dur="1.69"> घुसपैठाहरूको रूपमा, उनीहरूलाई मित्रको रूपमा स्वागत गर्नुहोस्। >
< start="490.82" dur="2.57"> ऊ भन्छ, तपाईलाई समस्या भयो, खुशी हुनुहोस्। >
< start="493.39" dur="2.09"> तपाईंले समस्या पाउनु भयो, रमाउनुहोस्। >
< start="495.48" dur="1.807"> तपाईले समस्या पाउनु भयो, मुस्कुराउनु। >
< start="499.51" dur="0.87"> अब मलाई थाहा छ तपाई के सोचिरहनु भएको छ। >
< start="500.38" dur="1.94"> तिमी जान्छौ, के तिमी मलाई ठट्टा गर्दैछौ? >
< start="502.32" dur="3.15"> म किन COVID-19 को बारे मा खुशी हुनुपर्छ? >
< start="505.47" dur="5"> म किन मेरो जीवनमा यी परीक्षाहरूको स्वागत गर्छु? >
< start="510.6" dur="2.31"> यो कसरी सम्भव छ? >
< start="512.91" dur="3.74"> रखरखावको यो सम्पूर्ण दृष्टिकोणको लागि कुञ्जी >
< start="516.65" dur="2.85"> एक संकट को बीचमा एक सकारात्मक दृष्टिकोण >
< start="519.5" dur="3.65"> शब्द बोध हो, यो शब्द बोध हो। >
< start="523.15" dur="2.19"> उनले भने, जब यो सबै प्रकारको परीक्षा हुन्छ >
< start="525.34" dur="2.99"> आफ्नो जीवनमा भीड, ती घुसपैठिएर को रूप मा रिसाउन छैन, >
< start="528.33" dur="4.89"> तर तिनीहरूलाई मित्रको रूपमा स्वागत गर्नुहोस्, र महसुस गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, >
< start="533.22" dur="3.75"> तिनीहरू तपाईंको विश्वासको जाँच गर्न आएका छन्। >
< start="536.97" dur="3.839"> र त्यसपछि उनी जान्छन्, यसले तिनीहरूको जीवनमा के उत्पादन गर्दछ। >
< start="540.809" dur="5"> उसले यहाँ के भनिरहेको छ कि ह्यान्डल गर्नमा तपाईको सफलता छ >
< start="545.99" dur="4.44"> हप्ताहरू जो यस अगाडि यस COVID-19 महामारीमा छन् >
< start="550.43" dur="2.87"> यो अब संसारभरि हो, र अधिक र अधिक >
< start="553.3" dur="3.11"> राष्ट्रहरू बन्द हुँदैछ, र तिनीहरू बन्द गर्दैछन् >
< start="556.41" dur="2.31"> रेस्टुरेन्ट र तिनीहरूले स्टोरहरू बन्द गर्दैछन्, >
< start="558.72" dur="1.89"> र उनीहरू स्कूलहरू बन्द गर्दैछन्, >
< start="560.61" dur="1.57"> र तिनीहरूले चर्चहरू बन्द गर्दैछन्, >
< start="562.18" dur="1.69"> र तिनीहरू कुनै पनि स्थान बन्द गर्दैछन् >
< start="563.87" dur="3.86"> जहाँ मानिसहरू भेला हुँदैछन्, र जस्तै यहाँ ओरेन्ज काउन्टीमा, >
< start="567.73" dur="4.29"> जहाँ हामीलाई यस महिना कसैसँग पनि भेट्न अनुमति छैन। >
< start="572.02" dur="3.75"> उहाँ भन्नुहुन्छ, यी समस्याहरू समाधान गर्नमा तपाईंको सफलता >
< start="575.77" dur="3.49"> तपाइँको समझ द्वारा निर्धारित गरिनेछ। >
< start="579.26" dur="1.3"> तपाईको समझबाट। >
< start="580.56" dur="3.24"> र ती समस्याहरूप्रति तपाईंको दृष्टिकोणबाट। >
< start="583.8" dur="3.69"> यो तपाइँले महसुस गर्नुहुन्छ, यो तपाइँलाई थाँहा छ। >
< start="587.49" dur="3.79"> अब, यो अंश मा पहिलो कुरा म तपाईंलाई महसुस गर्न चाहान्छु >
< start="591.28" dur="3.957"> के परमेश्वरले हामीलाई समस्याहरूको चार सम्झाउनीहरू दिनुहुन्छ? >
< start="595.237" dur="2.253"> तपाईं यी लेख्न चाहानुहुन्छ। >
< start="597.49" dur="2.07"> तपाईंको जीवनमा समस्याहरूको बारेमा चार रिमाइन्डरहरू, >
< start="599.56" dur="2.35"> जसमा हामी अहिलेबाट आउने संकटहरू पनि सामेल छन्। >
< start="601.91" dur="5"> पहिलो, उहाँ भन्छन, समस्याहरू अपरिहार्य हुन्छन्। >
< start="607.42" dur="2.34"> समस्याहरू अपरिहार्य छन्। >
< start="609.76" dur="1.04"> अब उसले कसरी भनेको छ? >
< start="610.8" dur="4.33"> ऊ भन्छ, जब सबै प्रकारका परीक्षाहरू आउँदछन्। >
< start="615.13" dur="4.41"> ऊ भन्दैन कि यदि सबै प्रकारका परीक्षाहरू आउँदछन्, ऊ कहिले भन्छन्। >
< start="619.54" dur="1.72"> तपाईं यसमा भर पर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="621.26" dur="3.27"> यो स्वर्ग छैन जहाँ सबै कुरा पूर्ण छन्। >
< start="624.53" dur="2.66"> यो पृथ्वी हो जहाँ सबै कुरा बिग्रिएको छ। >
< start="627.19" dur="2.05"> र उसले भन्दै छ कि तपाईलाई समस्याहरू हुनेछ, >
< start="629.24" dur="3.44"> तपाईलाई कठिनाइ हुनेछ, तपाई यसमा भर पर्न सक्नुहुन्छ, >
< start="632.68" dur="2.37"> तपाईं यसमा स्टक किन्न सक्नुहुन्छ। >
< start="635.05" dur="2.99"> अब, जेम्सले एक्लो भनेको यो कुरा होईन। >
< start="638.04" dur="1.62"> सबै बाइबल मार्फत यो भन्छ। >
< start="639.66" dur="2.77"> येशूले संसारमा तपाईं परीक्षा हुनेछ भन्नुभयो >
< start="642.43" dur="3.68"> र परीक्षा, र तपाईं कष्ट हुनेछ। >
< start="646.11" dur="2.29"> उनले भने कि तपाईलाई जीवनमा समस्याहरू हुन गइरहेको छ। >
< start="648.4" dur="3.07"> त्यसोभए हामी समस्याले गर्दा किन छक्क पर्छौं? >
< start="651.47" dur="1.632"> पत्रुस भन्छन् अचम्म नमान >
< start="653.102" dur="2.558"> जब तपाईं ज्वलन्त परीक्षणहरू मार्फत जानुहुन्छ। >
< start="655.66" dur="1.786"> भनेजस्तो व्यवहार नगर्नुहोला यो केहि नयाँ हो। >
< start="657.446" dur="2.744"> सबै जना कठिन समयमा गुजारा गर्दछन्। >
< start="660.19" dur="2.04"> जीवन गाह्रो छ। >
< start="662.23" dur="2.53"> यो स्वर्ग होइन, यो पृथ्वी हो। >
< start="664.76" dur="3.18"> कसैको प्रतिरक्षा, कोही पनि एक्लोन्ट छैन, >
< start="667.94" dur="2.94"> कसैको इन्सुलेट छैन, कसैलाई पनि छुट छैन। >
< start="670.88" dur="1.73"> उनले भन्छन कि तपाईसँग समस्या छ >
< start="672.61" dur="2.78"> किनभने ती अपरिहार्य छन्। >
< start="675.39" dur="3.84"> तपाईंलाई थाहा छ, मलाई एक समय याद छ जब म कलेजमा थिएँ। >
< start="679.23" dur="2.27"> धेरै वर्ष पहिले, म माध्यम थियो >
< start="681.5" dur="1.71"> केही वास्तवमै गाह्रो समय। >
< start="683.21" dur="3.09"> र मैले प्रार्थना गर्न थालें, मैले भने, "भगवान, मलाई धैर्य गर्नुहोस्।" >
< start="686.3" dur="2.91"> र परीक्षणहरू राम्रो हुनुको सट्टा, तिनीहरू खराब भए। >
< start="689.21" dur="2.22"> र मैले भने, "भगवान, मलाई साँच्चिकै धैर्यता चाहिन्छ," >
< start="691.43" dur="1.72"> र समस्याहरू झन् झन् खराब हुँदै गयो। >
< start="693.15" dur="2.43"> र मैले भने, "भगवान, मलाई साँच्चिकै धैर्यता चाहिन्छ," >
< start="695.58" dur="2.93"> उनीहरू झन् झन् खराब हुँदै गए। >
< start="698.51" dur="1.77"> के भइरहेको थियो? >
< start="700.28" dur="1.82"> खैर, अन्ततः मैले महसुस गरे कि लगभग छ महिना पछि, >
< start="702.1" dur="2.64"> म सुरु हुँदा भन्दा धेरै धैर्यवान थिएँ, >
< start="704.74" dur="2.07"> जुन तरिकाले परमेश्वरले मलाई धैर्यता सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो >
< start="706.81" dur="3.2"> ती कठिनाइहरूको बीचमा थियो। >
< start="710.01" dur="2.85"> अब, समस्याहरू कुनै प्रकारको वैकल्पिक पाठ्यक्रम होइनन् >
< start="712.86" dur="2.44"> जीवनमा लिनको लागि तपाईसँग छनौट छ। >
< start="715.3" dur="2.863"> होईन, तिनीहरू आवश्यक छन्, तपाईं ती अप्ट आउट गर्न सक्नुहुन्न। >
< start="719.01" dur="3.71"> जीवन स्कूलबाट स्नातक को लागी, >
< start="722.72" dur="1.96"> तपाईं कठिन दस्तक को स्कूल मा जाँदै हुनुहुन्छ। >
< start="724.68" dur="2.87"> तपाईं समस्याहरू पार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, ती अपरिहार्य छन्। >
< start="727.55" dur="1.35"> बाइबलले भनेको कुरा यही हो। >
< start="728.9" dur="2.43"> बाइबलले समस्याहरूको बारेमा भन्छ दोस्रो कुरा यो हो। >
< start="731.33" dur="3.923"> समस्याहरू चर हो, यसको मतलब तिनीहरू सबै समान हुँदैनन्। >
< start="735.253" dur="2.817"> तपाईं एक पछि अर्को समान समस्या प्राप्त गर्नुहुन्न। >
< start="738.07" dur="1.89"> तपाईं फरक व्यक्तिहरूको एक धेरै प्राप्त। >
< start="739.96" dur="2.11"> तपाईले उनीहरूलाई मात्र प्राप्त गर्नुहुन्न, तर तपाई बिभिन्न वस्तुहरू पनि पाउनुहुन्छ। >
< start="742.07" dur="5"> उहाँ भन्नुहुन्छ जब तपाईं परीक्षण, जब तपाईं सबै प्रकारका समस्याहरू छन्। >
< start="748.25" dur="2.09"> तपाइँ सर्कल लगाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाइँ नोटहरू लिइरहनुभएको छ भने। >
< start="750.34" dur="3.54"> जब सबै प्रकारका परीक्षाहरू तपाईंको जीवनमा आउँदछन्। >
< start="753.88" dur="3.25"> तिमीलाई थाहा छ, म माली हुँ, र मैले एक पटक अध्ययन गरेँ, >
< start="757.13" dur="2.32"> र मैले पत्ता लगाए कि सरकार यहाँ छ >
< start="759.45" dur="2.18"> संयुक्त राज्य अमेरिका मा वर्गीकृत छ >
< start="761.63" dur="3.493"> २०5 विभिन्न प्रकारको झार। >
< start="765.123" dur="4.767"> मलाई लाग्छ कि ती मध्ये %०% मेरो बगैंचामा बढ्छ। (हाँसो) >
< start="769.89" dur="2.52"> म प्रायः सोच्छु कि जब म तरकारी खेती गर्दैछु, >
< start="772.41" dur="2.85"> मैले वारेनको झार फार्ममा प्रवेश लिनु पर्छ। >
< start="775.26" dur="3.62"> तर त्यहाँ धेरै प्रकारका झारहरू छन्, >
< start="778.88" dur="1.82"> र त्यहाँ धेरै प्रकारका परीक्षणहरू छन्, >
< start="780.7" dur="1.76"> त्यहाँ धेरै प्रकारका समस्याहरू छन्। >
< start="782.46" dur="2.282"> तिनीहरू सबै आकारमा आउँछन्, तिनीहरू सबै आकारहरूमा आउँदछन्। >
< start="784.742" dur="2.898"> त्यहाँ 31१ भन्दा बढी स्वादहरू छन्। >
< start="787.64" dur="2.75"> यो शब्द यहाँ छ, सबै प्रकारका, जहाँ यो भन्छन् >
< start="790.39" dur="1.55"> तपाईंको जीवनमा सबै प्रकारका परीक्षाहरू छन्, >
< start="791.94" dur="4.26"> यो वास्तवमा ग्रीक मा मतलब भनेको बहुरंगी। >
< start="796.2" dur="2.795"> अर्को शब्दमा, त्यहाँ तनाव को शेड्स को एक धेरै छन् >
< start="798.995" dur="2.205"> तपाईंको जीवनमा, तपाईं यससँग सहमत हुनुहुन्छ? >
< start="801.2" dur="1.9"> त्यहाँ धेरै तनाव को शेड छन्। >
< start="803.1" dur="1.62"> तिनीहरू सबै एकै देखिँदैनन्। >
< start="804.72" dur="2.67"> त्यहाँ वित्तीय तनाव छ, त्यहाँ सम्बन्ध तनाव छ, >
< start="807.39" dur="2.37"> स्वास्थ्य तनाव छ, त्यहाँ शारीरिक तनाव छ, >
< start="809.76" dur="1.62"> त्यहाँ समय तनाव छ। >
< start="811.38" dur="5"> उसले भनिरहेको छ कि तिनीहरू सबै बिभिन्न रंगहरू हुन्। >
< start="816.41" dur="2.82"> तर यदि तपाईं बाहिर हुनुहुन्छ र तपाईं कार किन्नुहुन्छ र तपाईं चाहनुहुन्छ >
< start="819.23" dur="3.44"> एक अनुकूलन रंग, त्यसपछि तपाइँ यसको लागि कुर्नु पर्छ। >
< start="822.67" dur="2.98"> र त्यसपछि जब यो बनाइन्छ, तब तपाईं आफ्नो अनुकूलन रंग पाउनुहुनेछ। >
< start="825.65" dur="2.01"> यहाँ वास्तवमा शब्द प्रयोग गरिएको छ। >
< start="827.66" dur="4.99"> यो एक अनुकूलन रंग हो, तपाईंको जीवनमा बहुरंगी परीक्षणहरू। >
< start="832.65" dur="2.14"> भगवानले कुनै कारणको लागि अनुमति दिनुहुन्छ। >
< start="834.79" dur="3.07"> तपाईंको केहि समस्याहरू वास्तवमै अनुकूलित बनाइएको हो। >
< start="837.86" dur="1.842"> ती मध्ये केही हामी सबै एकसाथ अनुभव गरेका छौं, >
< start="839.702" dur="2.908"> यो जस्तै, COVID-19। >
< start="842.61" dur="1.95"> तर ऊ भन्दै छ कि समस्याहरू चर हो। >
< start="844.56" dur="2.845"> र यसको मतलब भनेको के हो जुन ती गहिराईमा फरक हुन्छन्। >
< start="847.405" dur="3.143"> अर्को शब्दहरुमा, तिनीहरू कत्ति गाह्रो आउँछन्। >
< start="850.548" dur="3.792"> तिनीहरू फ्रिक्वेन्सीमा भिन्न हुन्छन्, र त्यो कति लामो हुन्छ। >
< start="854.34" dur="1.421"> हामीलाई थाहा छैन यो कति लामो हुन्छ >
< start="855.761" dur="2.699"> हामीलाई थाहा छैन यो कति गाह्रो हुन्छ। >
< start="858.46" dur="2.197"> अर्को दिन मैले एउटा संकेत देखें जुनले भने, >
< start="860.657" dur="3.98"> "हरेक जीवनमा केही वर्षा पर्छ, >
< start="864.637" dur="2.743"> "तर यो हास्यास्पद छ।" (हाँसो) >
< start="867.38" dur="1.9"> र मलाई लाग्छ कि त्यो बाटो हो >
< start="869.28" dur="1.77"> धेरै व्यक्ति अहिले अहिल्यै महसुस गरिरहेका छन्। >
< start="871.05" dur="1.92"> यो हास्यास्पद छ। >
< start="872.97" dur="3.07"> समस्याहरू अपरिहार्य छन् र ती परिवर्तनशील छन्। >
< start="876.04" dur="2.86"> तेस्रो कुरा जेम्सले भन्छ त्यसैले हामी छक्क पर्दैनौं >
< start="878.9" dur="2.87"> समस्याहरु अप्रत्याशित छन्। >
< start="881.77" dur="1.6"> तिनीहरू अप्रत्याशित छन्। >
< start="883.37" dur="4.01"> उसले भन्छ जब तपाईको जीवनमा परीक्षाको भीड हुन्छ, >
< start="887.38" dur="2.05"> यदि तपाईं नोटहरू लिइरहनु भएको छ भने, उक्त वाक्यांशलाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्। >
< start="889.43" dur="3.13"> ती तपाईंको जीवनमा भीड। >
< start="892.56" dur="3.28"> हेर्नुहोस्, कुनै समस्या कहिले आउँदैन जब तपाईंलाई यसको आवश्यकता पर्छ >
< start="895.84" dur="1.6"> वा जब तपाईंलाई यसको आवश्यक पर्दैन। >
< start="897.44" dur="1.97"> यो आउँछ जब यो आउँछ। >
< start="899.41" dur="1.97"> यो कारण हो यो समस्याको एक अंश। >
< start="901.38" dur="3.05"> समस्याहरू सबैभन्दा inopportune समयमा आउँछन्। >
< start="904.43" dur="1.582"> के तपाईंले कहिल्यै समस्या जस्तो महसुस गर्नुभएको छ? >
< start="906.012" dur="2.778"> तपाईको जीवनमा आएको हो, तपाई अहिले जानुहुन्छ। >
< start="908.79" dur="2.51"> साँच्चै, अब जस्तै? >
< start="911.3" dur="3.82"> यहाँ सेडलब्याक चर्चमा हामी एउटा ठूलो अभियानमा थियौं >
< start="915.12" dur="2.45"> भविष्यको बारेमा सपना देख्दै >
< start="917.57" dur="3.27"> र अचानक कोरोनाभाइरस हिट। >
< start="920.84" dur="2.06"> र म जाँदैछु, अहिले होइन। >
< start="922.9" dur="1.673"> (चकल्स) अहिले होइन। >
< start="926.75" dur="3.073"> तपाईं ढिलो हुँदा कहिले फ्लैट टायर भएको छ? >
< start="931.729" dur="2.361"> तपाईं प्रशस्त टायर पाउनुहुन्न जब तपाईं प्रशस्त समय पाउनुभयो। >
< start="934.09" dur="1.823"> तपाई कतै जानको लागि हतारमा हुनुहुन्छ। >
< start="937.12" dur="4.08"> यो तपाईंको नयाँ पोशाकमा बच्चाले रोए जस्तै छ >
< start="941.2" dur="4.952"> जस्तो कि तपाई महत्त्वपूर्ण साँझको सment्लग्नताको लागि बाहिर जानुहुन्छ। >
< start="946.152" dur="2.918"> वा तपाइँ बोल्नु अघि तपाइँको प्यान्टहरू विभाजित गर्नुभयो। >
< start="949.07" dur="2.55"> त्यो वास्तवमै मलाई एक पटक भयो >
< start="951.62" dur="1.713"> धेरै समय अगाडि आइतवारमा। >
< start="956" dur="4.64"> केहि मानिसहरु, उनीहरु एकदमै अधीर छन्, >
< start="960.64" dur="1.77"> तिनीहरू घुम्ने ढोकाका लागि पर्खिन सक्दैनन्। >
< start="962.41" dur="1.72"> उनीहरूसँग भर्खर मात्र थियो, उनीहरूले यो गर्नुपर्‍यो, >
< start="964.13" dur="2.38"> उनीहरूले यो गर्नु पर्छ अब, तिनीहरूले अब यो गर्नु पर्छ। >
< start="966.51" dur="3.99"> मलाई याद छ धेरै वर्ष अघि म जापानमा थिएँ, >
< start="970.5" dur="3.34"> र म मेट्रोमा उभिरहेको थिएँ सबवेको लागि >
< start="973.84" dur="2.55"> आइपुग्न, र जब यो खोलियो, ढोका खोलियो, >
< start="976.39" dur="3.33"> र एक युवा जापानी मानिस तुरुन्तै >
< start="979.72" dur="4.49"> म त्यहाँ उभिरहेको थियो प्रक्षेपण मुान् उल्टो। >
< start="984.21" dur="5"> र मैले सोचें, किन मलाई, किन अब? >
< start="989.9" dur="3.583"> तिनीहरू अप्रत्याशित छन्, तिनीहरू आउँछन् जब तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यकता पर्दैन। >
< start="994.47" dur="2.94"> तपाईं विरलै आफ्नो जीवनमा समस्याहरूको भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="997.41" dur="3.69"> अब नोटिस गर्नुहोस्, यसले भन्छ जब सबै प्रकारका परीक्षणहरू, कहिले, >
< start="1001.1" dur="3"> तिनीहरू अपरिहार्य छन्, सबै प्रकारका, तिनीहरू भ्यारीएबल छन्, >
< start="1004.1" dur="3.98"> तपाईंको जीवनमा भीड, तिनीहरू अप्रत्याशित छन्, >
< start="1008.08" dur="3.213"> उनले भन्छन् कि ती मानिसहरूलाई घुसपैठिको रूपमा रिसाउँदैनन्। >
< start="1012.19" dur="1.01"> ऊ यहाँ के भनिरहेछ? >
< start="1013.2" dur="2.16"> ठिक छ, म यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या छु। >
< start="1015.36" dur="2.6"> तर यहाँ बाइबलले समस्याहरूको बारेमा चौथो कुरा भन्छ। >
< start="1017.96" dur="2.553"> समस्याहरू उद्देश्यपूर्ण छन्। >
< start="1021.4" dur="2.69"> समस्याहरू उद्देश्यपूर्ण छन्। >
< start="1024.09" dur="3.07"> सबै कुरामा भगवानको उद्देश्य हुन्छ। >
< start="1027.16" dur="2.72"> हाम्रो जीवनमा हुने नराम्रा चीजहरू पनि, >
< start="1029.88" dur="2.16"> परमेश्वर तिनीहरूबाट राम्रो कुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ। >
< start="1032.04" dur="1.64"> भगवानले हरेक समस्याको कारण हुनुहुन्न। >
< start="1033.68" dur="2.62"> धेरै जसो समस्याहरू हामी आफैंमा गर्छौं। >
< start="1036.3" dur="2.1"> मान्छेहरू भन्छन्, किन मानिसहरू बिरामी हुन्छन्? >
< start="1038.4" dur="3.69"> ठिकै छ, एउटा कारण यो हो कि हामी परमेश्वरले हामीलाई अह्राउनुभएको काम गर्दैनौं। >
< start="1042.09" dur="3.02"> यदि हामीले भगवानले हामीलाई खाने कुरा खायौं भने, >
< start="1045.11" dur="2.71"> यदि हामी सुतेको जस्तै ईश्वरले हामीलाई आराम गर्न बताउनुहुन्छ, >
< start="1047.82" dur="3.28"> यदि भगवानले हामीलाई व्यायाम गर्न बताउनु भएको छ भने हामी व्यायाम गर्छौं भने, >
< start="1051.1" dur="3.16"> यदि हामीले नकारात्मक भावनाहरूलाई हाम्रो जीवनमा अनुमति दिएनौं भने >
< start="1054.26" dur="2.06"> जस्तो भगवानले भन्छ, यदि हामी परमेश्वरको आज्ञापालन गर्छौं भने, >
< start="1056.32" dur="2.65"> हामीसँग हाम्रा धेरैजसो समस्याहरू हुँदैनन्। >
< start="1058.97" dur="3.07"> अध्ययनहरूले देखाए कि स्वास्थ्य समस्याहरूको लगभग %०% >
< start="1062.04" dur="3.57"> यो देश मा, अमेरिका मा, के भनिन्छ द्वारा निम्त्याइएको हो >
< start="1065.61" dur="3"> पुरानो जीवन शैली छनौट। >
< start="1068.61" dur="3.05"> अर्को शब्दहरुमा, हामी केवल सही कुरा गर्दैनौं। >
< start="1071.66" dur="1.14"> हामी स्वस्थ चीज गर्दैनौं। >
< start="1072.8" dur="2.66"> हामी प्रायः स्वयं विनाशकारी काम गर्दछौं। >
< start="1075.46" dur="2.58"> तर के उसले यहाँ भनेको छ, समस्याहरु उद्देश्यपूर्ण छन्। >
< start="1078.04" dur="3.53"> ऊ भन्छ जब तपाईले समस्याको सामना गर्नु हुन्छ, >
< start="1081.57" dur="3.46"> महसुस गर्न को लागी तिनीहरू उत्पादन गर्न आउँछन्। >
< start="1085.03" dur="3.56"> सर्कल त्यो वाक्यांश, तिनीहरू उत्पादन गर्न आउँछन्। >
< start="1088.59" dur="3.22"> समस्या उत्पादक हुन सक्छ। >
< start="1091.81" dur="2.23"> अब, ती स्वत: उत्पादक छैनन्। >
< start="1094.04" dur="3.06"> यो COVID भाइरस, यदि मैले ठीक दिनमा प्रतिक्रिया दिएन भने, >
< start="1097.1" dur="3.35"> यसले मेरो जीवनमा कुनै ठूलो कुराको उत्पादन गर्दैन। >
< start="1100.45" dur="2.17"> तर यदि मैले सहि प्रतिक्रिया दिएँ भने, >
< start="1102.62" dur="2.25"> मेरो जीवनमा पनि सबैभन्दा नकारात्मक चीजहरू >
< start="1104.87" dur="3.89"> विकास र लाभ र आशिष् उत्पादन गर्न सक्छ, >
< start="1108.76" dur="2.23"> तपाईंको जीवन र मेरो जीवनमा। >
< start="1110.99" dur="2.26"> तिनीहरू उत्पादन गर्न आउँछन्। >
< start="1113.25" dur="4.59"> उहाँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि दु: ख र तनाव >
< start="1117.84" dur="5"> र दुःख, हो, र रोग पनि केहि हासिल गर्न सक्छ >
< start="1123.42" dur="2.913"> मानको यदि हामी यसलाई दिन्छौं। >
< start="1127.363" dur="3.887"> यो सबै हाम्रो छनौटमा छ, यो सबै हाम्रो मनोवृत्तिमा छ। >
< start="1131.25" dur="4.043"> भगवानले हाम्रो जीवनमा कठिनाइहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। >
< start="1136.9" dur="2.33"> तपाईं भन्नुहोस्, ठीक छ, उसले कसरी गर्छ? >
< start="1139.23" dur="4.04"> हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले समस्या र समस्याहरू कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? >
< start="1143.27" dur="3.29"> ठिक छ, सोध्नु भएकोमा धन्यवाद, किनकि अर्को खण्ड >
< start="1146.56" dur="1.75"> वा पदको अर्को भाग भन्छन् >
< start="1148.31" dur="2.61"> कि परमेश्वरले ती तीन तरिका प्रयोग गर्नुहुन्छ। >
< start="1150.92" dur="3.09"> तीन तरिकाहरू, भगवानहरू तपाईंको जीवनमा समस्याहरू तीन तरिकाहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। >
< start="1154.01" dur="4.18"> सर्वप्रथम, समस्याहरूले मेरो विश्वासको जाँच गर्दछ। >
< start="1158.19" dur="2.03"> अब, तपाईंको विश्वास एक मांसपेशी जस्तै छ। >
< start="1160.22" dur="3.8"> मांसपेशीलाई बलियो बनाउन सकिदैन जबसम्म यो परिक्षण हुँदैन, >
< start="1164.02" dur="3.3"> जबसम्म यो तानिँदैन, जबसम्म यो दबाबमा राखिदैन। >
< start="1167.32" dur="4.99"> तपाईं केहि गर्नुभएर कडा मांसपेशीहरू विकास गर्नुहुन्न। >
< start="1172.31" dur="3.09"> तपाईं तिनीहरूलाई तानेर बलियो मांसपेशीहरू विकास गर्नुहोस् >
< start="1175.4" dur="2.53"> र उनीहरूलाई सुदृढ पार्दै र परीक्षण गर्दै >
< start="1177.93" dur="2.7"> र तिनीहरूलाई सीमामा धकेल्दै। >
< start="1180.63" dur="5"> त्यसैले उसले भनेको समस्याहरु मेरो विश्वासको परीक्षा गर्न आउँदैछ। >
< start="1185.88" dur="4.38"> उसले भन्छन कि उनीहरूले विश्वासको जाँच गर्न आएका थिए। >
< start="1190.26" dur="3.28"> अब, त्यो शब्दको परीक्षण त्यहाँै छ, त्यो एक शब्द हो >
< start="1193.54" dur="5"> बाइबल समयमा त्यो धातुलाई परिष्कृत गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो। >
< start="1198.61" dur="3.05"> र तपाई के गर्नुहुन्छ तपाई बहुमूल्य धातु लिनुहुन्छ >
< start="1201.66" dur="1.768"> जस्तै चाँदी वा सुन वा अरू केहि, >
< start="1203.428" dur="2.932"> र तपाईं यसलाई ठूलो भाँडोमा राख्नुहुनेछ, र तपाईंले यसलाई तातो पार्नुहुनेछ >
< start="1206.36" dur="2.54"> अत्यधिक उच्च तापमान, किन? >
< start="1208.9" dur="1.17"> उच्च तापमान मा, >
< start="1210.07" dur="3.34"> सबै अशुद्धताहरू जलाइन्छ। >
< start="1213.41" dur="4.05"> र केवल चीज मात्र बाँकी छ शुद्ध सुन >
< start="1217.46" dur="1.946"> वा शुद्ध चाँदी। >
< start="1219.406" dur="3.164"> त्यो परीक्षणको लागि युनानी शब्द हो। >
< start="1222.57" dur="4.54"> यो त सुकाउने आगो हो, जब परमेश्वरले तातो ताप राख्नुहुन्छ >
< start="1227.11" dur="1.705"> र हाम्रो जीवनमा अनुमति दिन्छ, >
< start="1228.815" dur="3.345"> यसले महत्वपूर्ण चीजहरू जलाउँछ। >
< start="1232.16" dur="2.94"> तपाइँलाई थाहा छ केहि हप्तामा के हुनेछ? >
< start="1235.1" dur="2.134"> स्टफ जुन हामी सबैले सोचेका थिए वास्तवमै महत्त्वपूर्ण थियो, >
< start="1237.234" dur="1.726"> हामी साकारै छौं, हम्म, म संगै छु >
< start="1238.96" dur="1.273"> त्यो बिना नै ठीक छ। >
< start="1241.1" dur="2.51"> यो हाम्रो प्राथमिकताहरू पुनःक्रम गराउने छ, >
< start="1243.61" dur="2.41"> किनकि चीजहरू परिवर्तन हुँदैछन्। >
< start="1246.02" dur="4.22"> अब, समस्याहरूको क्लासिक उदाहरण समस्याहरूले तपाईंको विश्वासको जाँच गर्दछ >
< start="1251.17" dur="4.02"> बाइबलमा अय्यूबको बारेमा कथाहरू छन्। >
< start="1255.19" dur="1.75"> कार्यको बारेमा पूरा पुस्तक छ। >
< start="1256.94" dur="3.49"> तपाईंलाई थाहा छ, बाइबल बाइबलमा सब भन्दा धनी मान्छे थियो, >
< start="1260.43" dur="2.74"> र एकै दिनमा, उसले सबै थोक हरायो। >
< start="1263.17" dur="2.82"> उसले आफ्नो सबै परिवार गुमायो, उसले आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमायो, >
< start="1265.99" dur="3.97"> उसले आफ्ना सबै साथीहरू गुमायो, आतंककारीहरूले उसको परिवारलाई आक्रमण गरे, >
< start="1269.96" dur="4.567"> ऊ डरलाग्दो र अत्यन्तै पीडादायी रोग भयो >
< start="1276.283" dur="3.437"> त्यो निको हुन सकेन। >
< start="1279.72" dur="1.323"> ठीक छ, ऊ टर्मिनल हो। >
< start="1282.109" dur="3.721"> तर पनि परमेश्वर उसको विश्वासको जाँच गर्दै हुनुहुन्थ्यो। >
< start="1285.83" dur="3.27"> र परमेश्वरले पछि उसलाई दोहोरो पुनर्स्थापित गर्नुभयो >
< start="1289.1" dur="3.423"> ठूलो परीक्षामा जानुभन्दा पहिले ऊसँग के थियो। >
< start="1293.59" dur="2.82"> एक समय मा मैले कतै लामो समय पहिले एउटा उद्धरण पढें >
< start="1296.41" dur="2.92"> त्यो मान्छे चिया झोला जस्तो हुन्छन्। >
< start="1299.33" dur="1.34"> तपाईलाई वास्तवमै थाहा छैन उनीहरूमा के छ >
< start="1300.67" dur="2.67"> जब सम्म तपाईं तिनीहरूलाई तातो पानीमा छोड्नुहुन्न। >
< start="1303.34" dur="3.09"> र त्यसोभए तपाईं उनीहरूको वास्तविक भित्र के देख्न सक्नुहुन्छ। >
< start="1306.43" dur="2.77"> के तपाईंले कहिल्यै ती तातो पानी दिनहरू मध्ये कुनै एक गर्नुभयो? >
< start="1309.2" dur="3.763"> तपाईंसँग कहिले पनि ती तातो पानी हप्ताहरू वा महिनाहरूमध्ये एक थियो? >
< start="1313.82" dur="3.78"> हामी अहिले तातो पानीको स्थितिमा छौं। >
< start="1317.6" dur="2.41"> र तपाईबाट बाहिर निस्किने कुरा भनेको तपाई भित्रको कुरा हो। >
< start="1320.01" dur="1.33"> यो टुथपेस्ट जस्तो छ। >
< start="1321.34" dur="4.15"> यदि मसँग टुथपेस्ट ट्यूब छ र म यसलाई धकेल्छु, >
< start="1325.49" dur="1.18"> के हुन आउँछ >
< start="1326.67" dur="0.9"> तपाईं भन्नुहोला, राम्रो, टुथपेस्ट। >
< start="1327.57" dur="1.65"> होइन, आवश्यक छैन। >
< start="1329.22" dur="1.95"> यसले बाहिर टुथपेस्ट भन्न सक्छ, >
< start="1331.17" dur="1.67"> तर यो marinara सॉस हुन सक्छ >
< start="1332.84" dur="2.6"> वा भित्र बदाम बटर वा मेयोनेज। >
< start="1335.44" dur="2.92"> के हुन्छ जब बाहिर आउँछ जब यो दबाव मा राखिएको छ >
< start="1338.36" dur="1.403"> यसमा जे छ त्यो हो। >
< start="1341.13" dur="3.603"> र अगाडि दिनहरूमा तपाईंले COVID भाइरससँग सम्झौता गर्दा, >
< start="1346.266" dur="2.224"> तपाईबाट बाहिर निस्किने भनेको तपाई भित्रको कुरा हो। >
< start="1348.49" dur="2.24"> र यदि तपाईं तीतोपनले भर्नुभयो भने, त्यो बाहिर आउँनेछ। >
< start="1350.73" dur="2.23"> र यदि तपाईं निराश हुनुहुन्छ, त्यो बाहिर आउँछ। >
< start="1352.96" dur="3.79"> र यदि तपाईं क्रोध वा चिन्ता वा दोषले भरिएको हुनुहुन्छ भने >
< start="1356.75" dur="3.46"> वा लाज वा असुरक्षा, त्यो बाहिर आउने छ। >
< start="1360.21" dur="4"> यदि तपाईं डरले भरिएको हुनुहुन्छ भने, जुन तपाईंको भित्रबाट हुन्छ >
< start="1364.21" dur="3.52"> के हुन्छ बाहिर आउन जब दबाव तपाईं मा दबिएको छ। >
< start="1367.73" dur="1.44"> र ऊ यहाँ हो भन्दै छ, >
< start="1369.17" dur="2.23"> ती समस्याहरूले मेरो विश्वासको परीक्षा गर्छ। >
< start="1371.4" dur="5"> तिमीलाई थाहा छ वर्षौं अगाडि मैले एउटा बूढा मान्छेलाई भेटेको थिएँ >
< start="1376.98" dur="3.23"> धेरै वर्ष पहिले पूर्वमा एउटा सम्मेलनमा। >
< start="1380.21" dur="1.74"> मलाई लाग्छ टेनेसी थियो। >
< start="1381.95" dur="3.91"> र ऊ, यस बुढो मान्छेले मलाई कसरी बिदा हुने बारे बतायो >
< start="1387.13" dur="4.8"> उनको जीवनको सबैभन्दा ठूलो फाइदा थियो। >
< start="1391.93" dur="2.017"> र मैले भने, "ठीक छ, म यो कथा सुन्न चाहन्छु। >
< start="1393.947" dur="1.523"> "मलाई यसको बारेमा सबै बताउनुहोस्।" >
< start="1395.47" dur="1.67"> र यो के थियो उसले काम गर्यो >
< start="1397.14" dur="2.823"> एक आरी मिलमा उसको जीवनको सबै। >
< start="1400.83" dur="2.41"> उहाँ आफ्नो जीवनको सबै एक काठपट्टी बनाउने थियो। >
< start="1403.24" dur="3.34"> तर एक दिन आर्थिक मन्दीको बेला, >
< start="1406.58" dur="3.607"> उसको मालिक भित्र आई र अचानक घोषणा गर्यो, "तपाईलाई निकालिएको छ"। >
< start="1411.19" dur="3.54"> र उसको सबै विशेषज्ञता ढोका बाहिर गयो। >
< start="1414.73" dur="4.62"> र उनलाई with० वर्षको उमेरमा एक श्रीमतीको साथ छोडियो >
< start="1419.35" dur="3.85"> र एक परिवार र उहाँ वरिपरि कुनै अन्य रोजगार अवसरहरू, >
< start="1423.2" dur="2.923"> र त्यहाँ मन्दी चलिरहेको थियो। >
< start="1427.03" dur="3.5"> उनी निराश भए र डराए। >
< start="1430.53" dur="1.77"> तपाईं कसैलाई अहिल्यै त्यस्तो लाग्न सक्छ। >
< start="1432.3" dur="1.58"> तपाईं पहिले नै बिछोडिएको हुन सक्छ। >
< start="1433.88" dur="1.76"> हुनसक्छ तपाई डराउनु भएको छ कि तपाई हुनुहुनेछ >
< start="1435.64" dur="2.63"> यो स during्कटको बेला बिछ्याइयो। >
< start="1438.27" dur="2.45"> र ऊ एकदम उदास थियो, ऊ एकदम डरायो। >
< start="1440.72" dur="1.827"> उनले भने, मैले यो लेखें, उनले भने, "मलाई मन पर्यो >
< start="1442.547" dur="3.97"> "मेरो जग्गा मबाट निकालिएको दिनमा गुफामा परेको थियो। >
< start="1446.517" dur="2.2"> "तर जब म घर गएको थिएँ, मैले मेरी पत्नीलाई के भयो भनें, >
< start="1448.717" dur="3.57"> "र उनले सोधिन्, 'त्यसोभए तिमी के गर्दैछौ?' >
< start="1452.287" dur="2.98"> "र मैले भनेँ, त्यसो भए पनि जब म बर्खास्त भएँ, >
< start="1455.267" dur="3.9"> "म गर्न गइरहेको छु म सँधै गर्न चाहन्थें। >
< start="1459.167" dur="1.84"> "एक बिल्डर बन्नुहोस्। >
< start="1461.007" dur="1.61"> "म हाम्रो घर धितो राख्दै छु >
< start="1462.617" dur="2.413"> "र म निर्माण व्यवसायमा जान्छु।" >
< start="1465.03" dur="2.887"> र उनले मलाई भने, "तपाईलाई थाहा छ, रिक, मेरो पहिलो उद्यम >
< start="1467.917" dur="4.13"> "दुई साना मोटेलहरूको निर्माण कार्य थियो।" >
< start="1472.965" dur="2.115"> त्यो उनले गरे। >
< start="1475.08" dur="4.267"> तर उनले भने, "पाँच बर्षभित्रमा म करोडपति भएँ।" >
< start="1480.21" dur="2.99"> त्यो मान्छेको नाम, त्यो मानिस जससँग म कुरा गर्दै थिएँ, >
< start="1483.2" dur="3.5"> वालेस जोनसन थियो, र त्यो व्यवसाय जुन उसले सुरु गर्यो >
< start="1486.7" dur="4.39"> हटाए पछि हलिडे इन्स भनिन्थ्यो। >
< start="1491.09" dur="1.44"> छुट्टी इन्स। >
< start="1492.53" dur="2.877"> वालेसले मलाई भने, "रिक, आज, यदि म पत्ता लगाउन सक्छु >
< start="1495.407" dur="3.13"> "मलाई निकाल्ने मानिस, म इमानदारीसाथ भन्छु >
< start="1498.537" dur="2.143"> "उसले गरेको कामको लागि उहाँलाई धन्यवाद।" >
< start="1500.68" dur="2.56"> त्यो समयमा जब यो भयो, मैले बुझिन >
< start="1503.24" dur="2.83"> किन मलाई बर्खास्त गरियो, मलाई किन झारियो। >
< start="1506.07" dur="3.94"> तर पछि मात्र मैले यो थाहा पाएँ कि त्यो परमेश्वरको अप्रत्याशित थियो >
< start="1510.01" dur="4.483"> र मलाई उनको छनौट को क्यारियर मा प्रवेश गर्न अचम्मको योजना। >
< start="1515.76" dur="3.05"> समस्याहरू उद्देश्यपूर्ण छन्। >
< start="1518.81" dur="1.17"> तिनीहरूको उद्देश्य छ। >
< start="1519.98" dur="4.18"> बुझ्नुहोस् तिनीहरू उत्पादन गर्न आउँछन्, र पहिलो चीजहरू मध्ये एक >
< start="1524.16" dur="3.984"> तिनीहरूले उत्पादन गर्दछन् ठूलो विश्वास, तिनीहरूले तपाईंको विश्वासको परीक्षा गर्छन्। >
< start="1528.144" dur="3.226"> नम्बर दुई, यहाँ समस्याहरूको दोस्रो फाइदा छ। >
< start="1531.37" dur="3.27"> समस्याहरूले मेरो धीरजको विकास गर्दछ। >
< start="1534.64" dur="1.52"> तिनीहरूले मेरो धीरजको विकास गर्छन्। >
< start="1536.16" dur="2.23"> यो वाक्यांश को अर्को भाग हो, यो भन्छ >
< start="1538.39" dur="5"> यी समस्याहरू धीरज विकास गर्न आउँछ। >
< start="1543.45" dur="2.33"> तिनीहरू तपाईंको जीवनमा धैर्यता विकास गर्दछन्। >
< start="1545.78" dur="1.91"> तपाईंको जीवनमा समस्याहरूको नतिजा के हुन्छ? >
< start="1547.69" dur="1.52"> रहिरहने शक्ति। >
< start="1549.21" dur="2.82"> यो शाब्दिक रूपमा दबाब चलाउने क्षमता हो। >
< start="1552.03" dur="2.253"> आज हामी यसलाई लचिलोपना भन्छौं। >
< start="1555.12" dur="1.79"> फिर्ता बाउन्स गर्ने क्षमता। >
< start="1556.91" dur="3.197"> र सबै बच्चाले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो गुणहरू मध्ये एक >
< start="1560.107" dur="3.473"> र प्रत्येक वयस्कले लचिलोपना सिक्नु पर्छ। >
< start="1563.58" dur="2.92"> किनकि सबै जना गिर्छन्, सबैले ठेस खाए, >
< start="1566.5" dur="2.05"> सबै जना कठिन समयमा पार हुन्छन्, >
< start="1568.55" dur="3.31"> सबैजना बिभिन्न समयमा बिरामी हुन्छन्। >
< start="1571.86" dur="2.39"> सबैको जीवनमा असफलता हुन्छ। >
< start="1574.25" dur="2.7"> यो तपाईं कसरी दबाब ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। >
< start="1576.95" dur="3.613"> धीरज, तपाईं जारी राख्नुहुन्छ र लागिरहन्छ। >
< start="1581.52" dur="1.99"> ठिक छ, तपाइँ त्यो गर्न कसरी सिक्नुहुन्छ? >
< start="1583.51" dur="3.53"> तपाईं कसरी दबाब नियन्त्रण गर्न सिक्नुहुन्छ? >
< start="1587.04" dur="2.28"> अनुभव को माध्यम बाट, कि एक मात्र तरीका हो। >
< start="1589.32" dur="4.93"> तपाई पाठ्यपुस्तकमा दबाब चलाउन सिक्नुहुन्न। >
< start="1594.25" dur="4.02"> तपाईं एक सेमिनार मा दबाव कसरी ह्यान्डल गर्न सिक्न छैन। >
< start="1598.27" dur="3.76"> तपाईं दबाबमा राखेर दबाब ह्यान्डल गर्न सिक्नुहुन्छ। >
< start="1602.03" dur="2.53"> र तपाईलाई के हो थाहा छैन >
< start="1604.56" dur="3.063"> जबसम्म तपाईं वास्तवमा त्यस्तो अवस्थामा राख्नुहुन्न। >
< start="1609.77" dur="2.7"> सेडलब्याक चर्च, १ 198 1१ को दोस्रो वर्षमा, >
< start="1612.47" dur="1.36"> म उदासीनताको दौरबाट गुज्रिरहेको छु >
< start="1613.83" dur="2.823"> जहाँ प्रत्येक एक हप्ता म राजीनामा गर्न चाहान्थे। >
< start="1617.64" dur="3.88"> र म हरेक आइतबार दिउँसो छोड्न चाहान्छु। >
< start="1621.52" dur="3.14"> र अझै, म मेरो जीवनमा गाह्रो समयबाट गुज्रिरहेको थियो, >
< start="1624.66" dur="2.3"> र अझै पनी म अर्कोको अगाडि एउटा खुट्टा राख्ने थिएँ >
< start="1626.96" dur="3.19"> भगवानको रूपमा, मलाई एक ठूलो चर्च बनाउन को लागी, >
< start="1630.15" dur="1.973"> तर भगवान, मलाई यस हप्ता मा प्राप्त गर्नुहोस्। >
< start="1633.01" dur="2.1"> र म छोड्दिन। >
< start="1635.11" dur="2.22"> मँ खुशी छु कि मैले हार मानेन। >
< start="1637.33" dur="3.09"> तर मँ अझै खुसी छु कि परमेश्वरले मलाई त्याग्नु भएन। >
< start="1640.42" dur="1.46"> किनभने त्यो एउटा परीक्षण थियो। >
< start="1641.88" dur="5"> र त्यो वर्षको परीक्षणको अवधिमा मैले केही आध्यात्मिक विकास गरें >
< start="1647.51" dur="3.56"> र सम्बन्ध र भावनात्मक र मानसिक शक्ति >
< start="1651.07" dur="4.28"> यसले मलाई वर्षौं पछि सबै प्रकारका बलहरू जुगल गर्न अनुमति दियो >
< start="1655.35" dur="4.64"> र सार्वजनिक आँखा मा भारी मात्रामा तनाव ह्यान्डल >
< start="1659.99" dur="2.01"> किनकि म त्यो बर्ष लाग्यो >
< start="1662" dur="3.363"> एक पछि अर्को कठिनाई बाहिर। >
< start="1666.51" dur="5"> तपाईंलाई थाहा छ, सुविधाको साथ अमेरिकाको प्रेम सम्बन्ध रहेको छ। >
< start="1672.57" dur="2.113"> हामी सुविधा मन पराउछौं। >
< start="1675.593" dur="3.187"> दिन र हप्ताहरूमा यो संकटमा >
< start="1678.78" dur="2.58"> त्यहाँ असुविधाजनक हुने धेरै चीजहरू छन्। >
< start="1681.36" dur="1.13"> असुविधाजनक >
< start="1682.49" dur="2.95"> र हामी आफैंलाई के गर्न जाँदैछौं >
< start="1685.44" dur="2.503"> जब सबै कुरा सहज छैन, >
< start="1688.96" dur="2.52"> जब तपाईं बस जारी राख्नुपर्दछ >
< start="1691.48" dur="2.1"> जब तपाइँलाई लागिरहेको महसुस गर्नुहुन्न। >
< start="1693.58" dur="5"> तपाईंलाई थाहा छ, ट्राइथ्लनको लक्ष्य वा म्याराथनको गोल >
< start="1698.71" dur="3.1"> वास्तवमै गतिको बारेमा होइन, तपाईं त्यहाँ कत्ति चाँडो पुग्नुहुन्छ, >
< start="1701.81" dur="1.86"> यो धैर्यको बारेमा बढी छ। >
< start="1703.67" dur="2.34"> के तपाइँ दौड समाप्त गर्नुहुन्छ? >
< start="1706.01" dur="2.43"> तपाईं त्यस्ता चीजहरूको लागि कसरी तयारी गर्नुहुन्छ? >
< start="1708.44" dur="2.13"> केवल उनीहरूको माध्यमबाट। >
< start="1710.57" dur="3.487"> त्यसोभए जब तपाईं अगाडि दिनहरूमा तन्काइनुहुन्छ, >
< start="1714.057" dur="2.213"> यसको बारेमा चिन्ता नगर, यसको बारेमा चिन्ता नगर। >
< start="1716.27" dur="3.02"> समस्याहरूले मेरो धीरजको विकास गर्दछ। >
< start="1719.29" dur="3.21"> समस्याहरूको उद्देश्य हुन्छ, ती उद्देश्यपूर्ण हुन्छन्। >
< start="1722.5" dur="2.6"> तेस्रो कुरा जुन जेम्सले हामीलाई समस्याहरूको बारेमा बताउँदछ >
< start="1725.1" dur="3.68"> हामी यो माध्यमबाट जान्छौं कि समस्याहरू मेरो चरित्रमा परिपक्व हुन्छन्। >
< start="1728.78" dur="3.68"> अनि उनले यसलाई याकूब अध्याय १ को पद in मा भने। >
< start="1732.46" dur="4.18"> उहाँ भन्छन् तर, प्रक्रिया जारी राख्नुहोस् >
< start="1736.64" dur="4.49"> जब सम्म तपाईं परिपक्व चरित्रको मानिस बन्न सक्नुहुन्न >
< start="1741.13" dur="3.663"> र कुनै कमजोर स्पट बिना इमानदारीता। >
< start="1746.3" dur="1.32"> के तपाई त्यो चाहानुहुन्न? >
< start="1747.62" dur="2.42"> के तपाई मानिसहरूलाई सुन्न मन पराउनुहुन्न, तपाईलाई थाहा छ, >
< start="1750.04" dur="3.32"> त्यो महिलाको चरित्रको कुनै कमजोर दाग छैन। >
< start="1753.36" dur="4.53"> त्यो मानिस, त्यो केटाको चरित्रमा कुनै कमजोर स्पट छैन। >
< start="1757.89" dur="3.04"> तपाईं कसरी त्यस्तो परिपक्व चरित्र पाउनुहुन्छ? >
< start="1760.93" dur="4.58"> प्रक्रिया हुन दिनुहोस् जबसम्म तपाईं व्यक्ति बन्नुहुन्न, >
< start="1765.51" dur="3.38"> पुरुष र महिला, परिपक्व चरित्र को >
< start="1768.89" dur="3.33"> र कुनै कमजोर स्पट बिना इमानदारीता। >
< start="1772.22" dur="2.6"> तपाईंलाई थाहा छ, त्यहाँ एउटा प्रसिद्ध अध्ययन गरिएको थियो धेरैले, >
< start="1774.82" dur="4"> धेरै वर्ष पहिले रूसमा जुन मलाई लेखेको याद छ, >
< start="1778.82" dur="4.08"> र यो कसरी फरक जीवन स्थिति को प्रभाव मा थियो >
< start="1782.9" dur="5"> दीर्घायु वा विभिन्न जनावरहरूको आयु प्रभावित। >
< start="1789.11" dur="3.6"> र यसैले तिनीहरूले केही जनावरहरू सहज जीवनमा राखे, >
< start="1792.71" dur="2.91"> र तिनीहरूले केही अन्य जनावरहरूलाई बढी कठिनमा राखे >
< start="1795.62" dur="1.89"> र कठोर वातावरण। >
< start="1797.51" dur="2.87"> र वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए कि जनावरहरू >
< start="1800.38" dur="2.22"> त्यो आरामदायक मा राखिएको थियो >
< start="1802.6" dur="2.88"> र सजिलो वातावरण, सर्तहरू, >
< start="1805.48" dur="4.73"> ती बस्ने अवस्था, वास्तवमा कमजोर भयो। >
< start="1810.21" dur="4.41"> किनकि परिस्थितिहरू यति सजिलो थिए, तिनीहरू कमजोर भए >
< start="1814.62" dur="2.22"> र अधिक रोग को लागी संवेदनशील। >
< start="1816.84" dur="5"> र जो आरामदायी अवस्थामा थिए उनीहरू चाँडै मरे >
< start="1821.9" dur="2.418"> जो अनुभव गर्न को लागी अनुमति थियो भन्दा >
< start="1824.318" dur="3.105"> जीवन को सामान्य कठिनाइहरु। >
< start="1828.72" dur="1.163"> त्यो रमाईलो छैन? >
< start="1830.81" dur="2.2"> के जनावरहरु को साँचो हो मलाई निश्चित छ >
< start="1833.01" dur="1.94"> हाम्रो चरित्र को पनि। >
< start="1834.95" dur="4.92"> र पश्चिमी संस्कृतिमा विशेष गरी आधुनिक संसारमा, >
< start="1839.87" dur="3.38"> हामीसंग यति सजिलो भएको छ धेरै मा। >
< start="1843.25" dur="1.973"> सुविधाजनक जीवन बिताउने। >
< start="1846.94" dur="1.71"> तपाईंको जीवनमा परमेश्वरको नम्बर एक गोल >
< start="1848.65" dur="2.67"> चरित्रमा तपाईं येशू ख्रीष्ट जस्तै बनाउनु हो। >
< start="1851.32" dur="1.87"> ख्रीष्ट जस्तै सोच्न, ख्रीष्ट जस्तै व्यवहार गर्न, >
< start="1853.19" dur="3.94"> ख्रीष्टको जस्तो जीवन बिताउन, ख्रीष्टको जस्तो प्रेम गर्न, >
< start="1857.13" dur="2.2"> ख्रीष्ट जस्तै सकारात्मक हुन। >
< start="1859.33" dur="3.62"> र यदि यो सत्य हो, र बाइबलले यसलाई बारम्बार भन्छ, >
< start="1862.95" dur="2.13"> त्यसो भए भगवानले तपाईंलाई उही चीजहरूमा लैजानुहुनेछ >
< start="1865.08" dur="4.304"> कि येशूले तपाईंको चरित्र बढ्न माध्यम जानुभयो। >
< start="1869.384" dur="2.786"> तिमीले भन्यौ, येशू कस्तो हुनुहुन्छ? >
< start="1872.17" dur="3.8"> येशू प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्यता र दयालु हुनुहुन्छ, >
< start="1875.97" dur="2.34"> आत्माको फल, ती सबै। >
< start="1878.31" dur="1.4"> र परमेश्वरले ती उत्पादन कसरी गर्नुहुन्छ? >
< start="1879.71" dur="2.9"> हामीलाई विपरीत परिस्थितिमा राखेर। >
< start="1882.61" dur="3.76"> हामी धैर्यता सिक्छौं जब हामी अधीर हुन लोभ्याउँछौं। >
< start="1886.37" dur="3.37"> हामी प्रेम सिक्छौं जब हामी बेवकूफ मानिसहरू वरिपरि राख्नु पर्छ। >
< start="1889.74" dur="2.49"> हामी शोकको बीचमा खुशी सिक्छौं। >
< start="1892.23" dur="4.67"> हामी प्रतीक्षा गर्न र यस प्रकारको धैर्य गर्न सिक्छौं >
< start="1896.9" dur="1.56"> जब हामी कुर्नु पर्छ। >
< start="1898.46" dur="3.423"> हामी दयालु हुन सिक्छौं जब हामी स्वार्थी हुन लोभ्याउँछौं। >
< start="1902.77" dur="3.66"> आगामी दिनहरूमा, यो धेरै लोभ्याउने छ >
< start="1906.43" dur="2.83"> केवल बन्करमा हन्कर गर्न, पछाडि तान्नुहोस्, >
< start="1909.26" dur="2.54"> र मैले भने, हामी हाम्रो ख्याल राख्छौं। >
< start="1911.8" dur="4.22"> म, म, र म, मेरो परिवार, हामी चार र अधिक >
< start="1916.02" dur="2.14"> र सबैलाई बिर्सनुहोस्। >
< start="1918.16" dur="2.62"> तर त्यसले तपाईको आत्मालाई संकुचन गर्नेछ। >
< start="1920.78" dur="2.51"> यदि तपाईं अरू व्यक्तिको बारेमा सोच्न थाल्नुहुन्छ भने >
< start="1923.29" dur="3.254"> र जो कमजोर छन् उनीहरूलाई सहयोग गर्दै, वृद्ध >
< start="1926.544" dur="4.026"> र ती प्रीक्सीटिंग सर्तहरूको साथ, >
< start="1930.57" dur="3.47"> र यदि तपाईं पुग्नुहुनेछ, तपाईंको आत्मा बढ्नेछ, >
< start="1934.04" dur="3.34"> तपाईंको मुटु बढ्नेछ, तपाईं अझ राम्रो व्यक्ति हुनुहुनेछ >
< start="1937.38" dur="5"> यस संकटको अन्त्यमा तपाईं सुरूमा भन्दा ठीक छ, हो? >
< start="1943.52" dur="2.98"> हे भगवान, तपाईले आफ्नो चरित्र निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ, >
< start="1946.5" dur="1.37"> उसले दुईवटा चीजहरू प्रयोग गर्न सक्छ। >
< start="1947.87" dur="2.92"> उसले आफ्नो वचन प्रयोग गर्न सक्दछ, सत्यले हामीलाई परिवर्तन गर्दछ, >
< start="1950.79" dur="3.56"> र उसले परिस्थितिहरू प्रयोग गर्न सक्छ जुन अझ गाह्रो छ। >
< start="1954.35" dur="4"> अब, भगवानले बरु पहिलो तरीका, शब्द प्रयोग गर्नुहुनेछ। >
< start="1958.35" dur="1.63"> तर हामी सँधै वचन सुन्दैनौं, >
< start="1959.98" dur="3.77"> त्यसैले उसले हाम्रो ध्यान आकर्षण गर्न परिस्थितिहरू चलाउँछ। >
< start="1963.75" dur="4.6"> र यो अधिक गाह्रो छ, तर यो प्राय: प्रभावकारी हुन्छ। >
< start="1968.35" dur="3.23"> अब, तपाईं भन्नुहोस्, ठीक छ, रिक, मैले बुझें, >
< start="1971.58" dur="4.22"> कि समस्याहरू परिवर्तनशील छन् र ती उद्देश्यपूर्ण छन्, >
< start="1975.8" dur="3.18"> र तिनीहरू यहाँ छन् मेरो विश्वासको परीक्षण गर्न, र तिनीहरू हुनेछन् >
< start="1978.98" dur="2.47"> सबै बिभिन्न प्रकारका, र तिनीहरू आउँदैन जब म तिनीहरूलाई चाहान्छु। >
< start="1981.45" dur="4.393"> र भगवान मेरो चरित्र बढाउन र मेरो जीवन परिपक्व गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="1986.95" dur="1.72"> त्यसो भए म के गर्ने छु? >
< start="1988.67" dur="4.94"> अर्को केही दिन र हप्ताहरूमा र महिनौं अगाडि >
< start="1993.61" dur="3.75"> जब हामी सँगै यस कोरोनाभाइरसको संकटको सामना गर्दछौं, >
< start="1997.36" dur="4.09"> मैले मेरो जीवनमा समस्याहरूको जवाफ कसरी दिने? >
< start="2001.45" dur="1.98"> र म केवल भाइरसको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन। >
< start="2003.43" dur="2.747"> म समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु जुन परिणाम स्वरूप आउनेछ >
< start="2006.177" dur="5"> काम बाहिर वा बच्चाहरू घरमा हुनुहुन्छ >
< start="2011.26" dur="3.12"> वा अन्य सबै चीजहरू जुन जीवन विचलित हुन्छ >
< start="2014.38" dur="1.553"> यो सामान्य रूपमा भएको छ। >
< start="2017.04" dur="2.24"> मैले मेरो जीवनका समस्याहरूमा कसरी प्रतिक्रिया देखाउने? >
< start="2019.28" dur="2.9"> फेरि, जेम्स धेरै विशिष्ट छ, >
< start="2022.18" dur="3.39"> र उसले हामीलाई तीन धेरै व्यावहारिक दिन्छ, >
< start="2025.57" dur="4.45"> तिनीहरू कट्टरपन्थी प्रतिक्रियाहरू हुन्, तर तिनीहरू सही प्रतिक्रियाहरू हुन्। >
< start="2030.02" dur="1.32"> वास्तवमा, जब म तपाईलाई पहिलो कुरा भन्छु, >
< start="2031.34" dur="2.21"> तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईं मलाई मजाक गर्नु हुनेछ। >
< start="2033.55" dur="3.07"> तर त्यहाँ तीन प्रतिक्रियाहरू छन्, ती सबै आरबाट सुरू हुन्छन्। >
< start="2036.62" dur="2.76"> पहिलो प्रतिक्रिया उसले भन्छ जब तपाईं हुनुहुन्छ >
< start="2039.38" dur="4.46"> गाह्रो समयमा पार गर्दै, रमाउनुहोस्। >
< start="2043.84" dur="2.41"> तपाईं जानुहुन्छ, म ठट्टा गर्दैछु? >
< start="2046.25" dur="1.73"> त्यो masochistic लाग्छ। >
< start="2047.98" dur="2.29"> मैले समस्यामा रमाईलो गरिरहेको छैन। >
< start="2050.27" dur="1.69"> यो मात्र एक मिनेट मा मलाई पछ्याउनुहोस्। >
< start="2051.96" dur="3.54"> उसले भन्छ कि यो शुद्ध आनन्द विचार। >
< start="2055.5" dur="2.69"> यी समस्याहरूलाई मित्रको रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्। >
< start="2058.19" dur="1.78"> अब मलाई नबुझ्नुहोस्। >
< start="2059.97" dur="3.14"> उसले यो नक्कली भनिरहेको छैन। >
< start="2063.11" dur="3.57"> उसले प्लास्टिकको मुस्कानमा राखेको भनेको छैन, >
< start="2066.68" dur="2.33"> नाटक गर्नुहोस् कि सबै ठीकठाक छ र यो छैन, >
< start="2069.01" dur="1.36"> किनकि यो छैन। >
< start="2070.37" dur="3.12"> Pollyanna, सानो अनाथ एनी, सूर्य >
< start="2073.49" dur="3.512"> भोली बाहिर आउनेछ, यो भोली बाहिर आउन सक्दैन। >
< start="2077.002" dur="3.568"> ऊ वास्तविकतालाई अस्वीकार गरिरहेको छैन, होईन। >
< start="2080.57" dur="2.76"> उसले मासुचिस्ट हुन भनेको होइन। >
< start="2083.33" dur="2.87"> हे केटा, म दुखाइबाट गुज्रन्छु। >
< start="2086.2" dur="1.72"> ईश्वरले कष्टलाई तपाई जस्तो घृणा गर्नुहुन्छ। >
< start="2087.92" dur="2.1"> ओह, म दुखी हुन्छु, हे। >
< start="2090.02" dur="3.49"> र तपाईंसँग यो शहीद जटिल छ, र तपाईंलाई थाहा छ, >
< start="2093.51" dur="1.937"> ममा यो आध्यात्मिक अनुभूति हुन्छ जब मलाई खराब लाग्छ। >
< start="2095.447" dur="2.983"> होइन, होइन, होईन, भगवान तपाईं एक शहीद भएको चाहनुहुन्न। >
< start="2098.43" dur="1.54"> भगवान तपाईले पाएको चाहनुहुन्न >
< start="2099.97" dur="3.453"> दुखाइप्रति मास्कोटिस्टिक मनोवृत्ति। >
< start="2104.74" dur="2.5"> तपाईंलाई थाहा छ, मलाई याद छ म एक पटकबाट गुज्रिरहेको थिएँ >
< start="2107.24" dur="3.21"> वास्तवमै गाह्रो समय र साथी दयालु हुन खोज्दै थियो >
< start="2110.45" dur="2.307"> र तिनीहरूले भने, "तपाईंलाई थाहा छ, रिक, खुशी हो >
< start="2112.757" dur="1.86"> "किनभने परिस्थिति अझ खराब हुन सक्छ।" >
< start="2115.61" dur="2.14"> र के अनुमानित गर्नुहोस्, ती बढि खराब भयो। >
< start="2117.75" dur="2.23"> त्यो कुनै सहायता थिएन। >
< start="2119.98" dur="2.225"> म खुशी थिएँ र उनीहरू झन् खराब हुँदै गए। >
< start="2122.205" dur="1.105"> (चकल्स) >
< start="2123.31" dur="4.588"> त्यसोभए यो एक नक्कली Pollyanna सकारात्मक सोच को बारे मा छैन। >
< start="2127.898" dur="3.352"> यदि म उत्साहित कार्य गर्दछु, म उत्साहित हुनेछु। >
< start="2131.25" dur="2.88"> होइन, होइन, होईन, होईन, यो धेरै छ, यो भन्दा धेरै गहिराइ हो। >
< start="2134.13" dur="5"> हामी आनन्दित हुँदैनौं, सुन्नेछौं, हामी समस्याको लागि रमाउँदैनौं। >
< start="2140.17" dur="5"> हामी समस्यामा छौं, जब हामी समस्यामा छौं ,मा रमाउँछौं। >
< start="2145.71" dur="2.13"> रमाउनको लागि अझै धेरै चीजहरू छन्। >
< start="2147.84" dur="2.92"> समस्या आफै होइन, तर अन्य चीजहरू पनि >
< start="2150.76" dur="2.514"> जुन हामी समस्याहरूमा रमाउन सक्छौं। >
< start="2153.274" dur="2.836"> किन हामी समस्यामा रमाउन सक्छौं? >
< start="2156.11" dur="2.54"> 'किनकी हामीलाई थाहा छ यसको लागि एक उद्देश्य छ। >
< start="2158.65" dur="1.74"> किनकि हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर हामीलाई कहिले पनि छोडनुहुन्न। >
< start="2160.39" dur="2.97"> किनकि हामीलाई धेरै चीजहरू थाहा छ। >
< start="2163.36" dur="1.81"> हामीलाई थाहा छ कि भगवानको एक उद्देश्य छ। >
< start="2165.17" dur="4.58"> याद गर्नुहोस् उनले भनेका छन् यसलाई शुद्ध आनन्द मानेर। >
< start="2169.75" dur="1.98"> शब्दलाई गोलो लगाउनुहोस्। >
< start="2171.73" dur="4.8"> विचारको लागि जानाजानी आफ्नो दिमाग बनाउन को लागि मतलब गर्नुहोस्। >
< start="2176.53" dur="2.22"> तपाइँको मनोवृत्ति समायोजन भयो >
< start="2178.75" dur="1.71"> तपाईंले यहाँ बनाउनु भएको छ। >
< start="2180.46" dur="3.869"> के यो तपाईको रोजाई खुशी हो? >
< start="2184.329" dur="3.201"> भजन 34 34 पद एक मा, उनी भन्छन् >
< start="2187.53" dur="3.69"> म प्रत्येक पल्ट परमप्रभुलाई धन्यको भन्नेछु। >
< start="2191.22" dur="1.39"> सबै समयमा। >
< start="2192.61" dur="0.92"> र उसले भन्छ म गर्नेछु। >
< start="2193.53" dur="2.48"> यो इच्छाको छनौट हो, यो निर्णय हो। >
< start="2196.01" dur="1.66"> यो प्रतिबद्धता हो, यो एक विकल्प हो। >
< start="2197.67" dur="4.08"> अब, तपाई यस महिना अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ >
< start="2201.75" dur="2.4"> या त राम्रो मनोवृत्ति वा नराम्रो दृष्टिकोणको साथ। >
< start="2204.15" dur="2.7"> यदि तपाईंको मनोवृत्ति खराब छ भने, तपाईं आफैंलाई बनाउन लाग्नु भएको छ >
< start="2206.85" dur="2.35"> र तपाईको वरपर सबैजना दयनीय छ। >
< start="2209.2" dur="3.15"> तर यदि तपाइँको मनोवृत्ति राम्रो छ, तपाइँलाई रमाउन को लागी छनौट छ। >
< start="2212.35" dur="1.76"> तपाईं भन्नुहोस्, हामी उज्यालो पक्षमा हेरौं। >
< start="2214.11" dur="3.09"> आउनुहोस् ती चीजहरू खोजौं जुन हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौं। >
< start="2217.2" dur="2.15"> र हामी यो पनि महसुस गरौं कि नराम्रो अवस्थामा पनि, >
< start="2219.35" dur="2.88"> परमेश्वर खराबबाट राम्रो कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ। >
< start="2222.23" dur="2.29"> त्यसोभए मनोवृत्ति समायोजन गर्नुहोस्। >
< start="2224.52" dur="3.25"> म यस स in्कटमा कटु हुन सक्दिन। >
< start="2227.77" dur="3.23"> म यो स in्कटमा अझ राम्रो हुन सक्छु। >
< start="2231" dur="4.39"> मँ छनौट गर्न छु, यो मेरो रमाईलो विकल्प हो। >
< start="2235.39" dur="3.41"> ठीक छ, नम्बर दुई, दोस्रो आर अनुरोध छ। >
< start="2238.8" dur="4.08"> र त्यो ज्ञानको लागि परमेश्वरलाई सोध्नु हो। >
< start="2242.88" dur="3.29"> यो तपाईं के गर्न चाहानुहुन्छ जुनसुकै बेला तपाईं संकटमा हुनुहुन्छ। >
< start="2246.17" dur="2.39"> तपाईं भगवानसँग बुद्धिको लागि सोध्न चाहानुहुन्छ। >
< start="2248.56" dur="2.1"> गत हप्ता, यदि तपाईंले पछिल्लो हप्ताको सन्देश सुन्नुभयो भने, >
< start="2250.66" dur="2.72"> र यदि तपाईंले यो हराउनुभयो भने, अनलाइन फिर्ता जानुहोस् र त्यो सन्देश हेर्नुहोस् >
< start="2253.38" dur="5"> कुनै डर बिना भाइरस को उपत्यका को माध्यम बाट बनाउने मा। >
< start="2260.09" dur="2.15"> रमाइलो गर्न तपाईको छनौट हो, >
< start="2262.24" dur="2.733"> तर त्यसो भए तपाईले परमेश्वरबाट बुद्धिको लागि सोध्नु हुन्छ। >
< start="2265.89" dur="2.13"> र तपाईं बुद्धिको लागि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस् र तपाईं प्रार्थना गर्नुहुन्छ >
< start="2268.02" dur="1.51"> र तपाईं आफ्नो समस्याहरूको बारेमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ। >
< start="2269.53" dur="2.99"> पद सात मा यो एक याकूब मा भन्छन्। >
< start="2272.52" dur="4.83"> यदि यस प्रक्रियामा तपाईं मध्ये कसैलाई कसरी भेट्ने थाहा छैन >
< start="2277.35" dur="4.05"> कुनै खास समस्या, यो फिलिप्स अनुवादबाट बाहिर छ। >
< start="2281.4" dur="2.24"> यदि प्रक्रियामा तपाईं को कुनै पनि कसरी भेट्ने थाहा छैन >
< start="2283.64" dur="3.44"> कुनै खास समस्या तपाईले परमेश्वरलाई सोध्नु पर्छ >
< start="2287.08" dur="2.65"> उहाँ सबै मानिसहरूलाई उदारता दिनुहुन्छ >
< start="2289.73" dur="2.6"> उनीहरूलाई दोषी महसुस नगरीकन। >
< start="2292.33" dur="3.45"> र तपाई पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि आवश्यक ज्ञान >
< start="2295.78" dur="1.963"> तपाईंलाई दिइनेछ। >
< start="2298.65" dur="2.18"> तिनीहरू भन्छन् किन सबै चीजको लागि म ज्ञानको लागि सोध्छु >
< start="2300.83" dur="1.35"> समस्याको बिचमा? >
< start="2303.29" dur="2.07"> त्यसोभए तपाई यसबाट सिक्नुहोस्। >
< start="2305.36" dur="1.57"> त्यसोभए तपाईं समस्याबाट सिक्न सक्नुहुन्छ, >
< start="2306.93" dur="1.48"> त्यसैले तपाईं बुद्धि माग्नुहुन्छ। >
< start="2308.41" dur="4.26"> यो धेरै बढी सहयोगी छ यदि तपाईंले किन सोध्नुभयो भने, >
< start="2312.67" dur="3.04"> यो किन भइरहेको छ, र के भनेर सोध्नुहोस्, >
< start="2315.71" dur="1.45"> तपाईले मलाई के सिकाएको चाहानुहुन्छ? >
< start="2318.09" dur="1.92"> म के बन्न चाहन्छु? >
< start="2320.01" dur="2.27"> म योबाट कसरी बढ्न सक्छु? >
< start="2322.28" dur="2.17"> म कसरी राम्रो महिला बन्न सक्छु? >
< start="2324.45" dur="4.51"> म यो संकटबाट कसरी अझ राम्रो मानिस बन्न सक्छु? >
< start="2328.96" dur="1.32"> हो, म परिक्षण भइरहेको छु। >
< start="2330.28" dur="1.53"> म किनको बारेमा चिन्ता गर्दिन। >
< start="2331.81" dur="1.71"> किन वास्तवमै फरक पर्दैन। >
< start="2333.52" dur="3.77"> के महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, म के हुन गइरहेको छु >
< start="2337.29" dur="3.7"> र म यस अवस्थाबाट के सिक्न सक्छु? >
< start="2340.99" dur="2.71"> र त्यसो गर्नको लागि तपाईसँग बुद्धि माग्नु पर्छ। >
< start="2343.7" dur="2.56"> त्यसैले उसले भन्छ जब तपाईलाई बुद्धिको आवश्यकता पर्छ, भगवानलाई सोध्नुहोस्, >
< start="2346.26" dur="1.61"> भगवानले तपाईंलाई यो दिनुहुन्छ। >
< start="2347.87" dur="2.2"> त्यसोभए तिमी भन्छौ, भगवान, मलाई आमाको रूपमा बुद्धिको आवश्यकता छ। >
< start="2350.07" dur="3.23"> मेरा बच्चाहरु अर्को महिना को लागी घर जाँदैछन्। >
< start="2353.3" dur="2.22"> मलाई बुवाको जस्तो बुद्धिको आवश्यकता छ। >
< start="2355.52" dur="3.48"> म कसरी अग्रणी हुन्छ जब हाम्रो रोजगार संकटमा हुन्छ >
< start="2359" dur="1.553"> र म अहिले काम गर्न सक्दिन? >
< start="2362.05" dur="1.45"> बुद्धिको लागि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। >
< start="2363.5" dur="1.84"> नसोध्नुहोस् किन, तर के भनेर सोध्नुहोस्। >
< start="2365.34" dur="2.99"> त्यसोभए पहिले तपाईं रमाउनुहुन्छ, तपाईं सकारात्मक मनोवृत्ति पाउनुहुन्छ >
< start="2368.33" dur="3.14"> म भगवानलाई धन्यवाद दिन छु समस्याको लागि होइन, >
< start="2371.47" dur="3.14"> तर म समस्यामा भगवानलाई धन्यवाद दिन छु। >
< start="2374.61" dur="2.92"> किनभने जीवन राम्रो छ जब पनि परमेश्वरको राम्रो। >
< start="2377.53" dur="2.137"> यसैले म यस श्रृंखलालाई कल गर्दैछु >
< start="2379.667" dur="5"> "जीवन छैन जब काम गर्दछ वास्तविक विश्वास।" >
< start="2385.41" dur="1.473"> जब जीवनले काम गर्दैन। >
< start="2387.96" dur="1.69"> त्यसैले म रमाउँछु र अनुरोध गर्दछु। >
< start="2389.65" dur="4.32"> तेस्रो कुरा जेम्सले गर्न भने आराम गर्नुहोस्। >
< start="2393.97" dur="4.83"> हो, केवल थोडा चिल बाहिर, आफैलाई प्राप्त छैन >
< start="2398.8" dur="3.86"> सबै नसहरु को एक ढेर मा। >
< start="2402.66" dur="2.64"> तनावग्रस्त नहुनुहोस् तपाई केहि गर्न सक्नुहुन्न। >
< start="2405.3" dur="1.33"> भविष्यको बारेमा चिन्ता नगर। >
< start="2406.63" dur="2.83"> भगवान्‌ भन्छन् मँ तपाईको ख्याल राख्छु, मलाई विश्वास गर्नुहोस्। >
< start="2409.46" dur="2.42"> के उत्तम हो भनेर थाहा पाउन तपाई भगवानमा भरोसा राख्नुहुन्छ। >
< start="2411.88" dur="2.17"> तपाईं उसलाई सहयोग। >
< start="2414.05" dur="4.84"> तपाई सर्ट सर्किट गर्नुहुन्न जुन अवस्था तपाईले गुज्रिरहनु भएको छ। >
< start="2418.89" dur="3.07"> तर तपाईं केवल भगवान, भन्न, म आराम गर्न छु। >
< start="2421.96" dur="2.28"> म शंका गर्ने छैन। >
< start="2424.24" dur="1.87"> म शंका गर्ने छैन। >
< start="2426.11" dur="2.76"> म यस स्थितिमा तपाईलाई विश्वास गर्न वाला छु। >
< start="2428.87" dur="3.15"> पद आठ को अन्तिम पद छ हामी हेर्न छौं। >
< start="2432.02" dur="1.26"> ठिक छ, हामी एक मिनेट मा एक अर्को हेर्नेछौं। >
< start="2433.28" dur="5"> तर पद आठ भन्छ, तर तपाईं निष्कपट विश्वास मा सोध्नु पर्छ >
< start="2438.9" dur="2.49"> गोप्य श doubts्का बिना। >
< start="2441.39" dur="1.86"> इमान्दार विश्वासमा तपाई के माग्दै हुनुहुन्छ? >
< start="2443.25" dur="1.57"> बुद्धिको लागि सोध्नुहोस्। >
< start="2444.82" dur="2.07"> र भन्नुहोस्, भगवान, मलाई बुद्धिको आवश्यकता छ, र म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु >
< start="2446.89" dur="1.26"> तपाईं मलाई बुद्धि दिनुहुन्छ। >
< start="2448.15" dur="2.89"> म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईले मलाई बुद्धि दिनुहुन्छ। >
< start="2451.04" dur="3.06"> बाहिर फिक्री नगर्नुहोस्, शंका नगर्नुहोस्, >
< start="2454.1" dur="2.57"> तर यसलाई परमेश्वर समक्ष ल्याउनुहोस्। >
< start="2456.67" dur="5"> तपाईंलाई थाहा छ, बाइबल भन्छ, यसभन्दा अघि मैले औंल्याए >
< start="2461.67" dur="3.24"> कि यसले यी धेरै प्रकारका समस्याहरू भनेको छ। >
< start="2464.91" dur="1.8"> तपाईंलाई थाहा छ, हामी उनीहरूको बारेमा रंगीन रंगका बारे कुरा गर्छौं। >
< start="2466.71" dur="2.23"> धेरै, धेरै प्रकारका समस्याहरू। >
< start="2468.94" dur="2.81"> ग्रीकमा त्यो शब्द, धेरै प्रकारका समस्या, >
< start="2471.75" dur="3.11"> पहिलो पत्रुसले समेटिएको उही शब्द हो >
< start="2474.86" dur="1.97"> चौथो अध्याय, पद चार भनेर भने >
< start="2476.83" dur="4.11"> तपाईंलाई दिनुहुने थुप्रै प्रकारका अनुग्रह परमेश्वर हुनुहुन्छ। >
< start="2480.94" dur="3.35"> परमेश्वरको धेरै प्रकारको अनुग्रह। >
< start="2484.29" dur="5"> यो समान बहुरंगी, बहु रंगीन, हीरा जस्तै हो। >
< start="2489.339" dur="1.694"> उसले त्यहाँ के भनिरहेछ? >
< start="2492.28" dur="2.08"> तपाईंसँग प्रत्येक समस्याको लागि, >
< start="2494.36" dur="2.87"> त्यहाँ उपलब्ध परमेश्वरको अनुग्रह छ। >
< start="2497.23" dur="5"> हरेक धेरै प्रकारको परीक्षण र स For्कष्टको लागि >
< start="2502.74" dur="4.5"> र कठिनाई, त्यहाँ एक प्रकारको अनुग्रह र दया छ >
< start="2507.24" dur="2.25"> र शक्ति जुन तपाइँले दिन चाहानुहुन्छ >
< start="2509.49" dur="2.05"> त्यो विशेष समस्या मेल गर्न। >
< start="2511.54" dur="2.04"> तपाईंलाई यसको लागि अनुग्रह चाहिन्छ, तपाईंलाई यसको लागि अनुग्रह चाहिन्छ, >
< start="2513.58" dur="1"> तपाईंलाई यसको लागि अनुग्रह चाहिन्छ। >
< start="2514.58" dur="3.76"> भगवान्‌ भन्छन् मेरो अनुग्रह बहुआयामी छ >
< start="2518.34" dur="1.99"> समस्याहरू जुन तपाईं सामना गर्दै हुनुहुन्छ। >
< start="2520.33" dur="1.27"> त्यसोभए म के भनिरहेछु? >
< start="2521.6" dur="1.74"> म भनिरहेछु कि तपाईको जीवनमा रहेका सबै समस्याहरू, >
< start="2523.34" dur="2.44"> यस COVID संकट सहित, >
< start="2525.78" dur="4.03"> शैतान भनेको यी समस्याहरु संग तपाइँलाई हराउन छ। >
< start="2529.81" dur="4.41"> तर ईश्वर यसको मतलब तपाईंलाई यी समस्याहरू मार्फत विकास गर्नु हो। >
< start="2534.22" dur="3.543"> ऊ शैतानलाई हराउन चाहन्छ, तर परमेश्वर तपाईंलाई विकास गर्न चाहानुहुन्छ। >
< start="2539.44" dur="2.12"> अब, तपाईको जीवनमा आउने समस्याहरू >
< start="2541.56" dur="3.34"> स्वचालित रूपमा तपाईलाई राम्रो व्यक्ति बनाउनुहुन्न। >
< start="2544.9" dur="2.51"> धेरै मानिसहरु उनीहरूबाट तीतो मान्छे हुन्छन्। >
< start="2547.41" dur="3.28"> यसले स्वचालित रूपमा तपाईलाई राम्रो व्यक्ति बनाउँदैन। >
< start="2550.69" dur="2.96"> यो तपाईंको दृष्टिकोण हो कि फरक पार्छ। >
< start="2553.65" dur="2.86"> र यहीँ म तपाईंलाई अर्को कुरा सम्झन चाहन्छु। >
< start="2556.51" dur="3.07"> नम्बर चार, सम्झन चौथो कुरा >
< start="2559.58" dur="3.75"> जब तपाईं समस्याहरूको माध्यमबाट जाँदै हुनुहुन्छ सम्झनु हो >
< start="2563.33" dur="1.99"> परमेश्‍वरका प्रतिज्ञाहरू। >
< start="2565.32" dur="1.84"> परमेश्‍वरका प्रतिज्ञाहरूलाई याद गर्नुहोस्। >
< start="2567.16" dur="1.28"> त्यो पद १२ मा तल छ। >
< start="2568.44" dur="1.52"> मलाई यो वाचा पढ्न दिनुहोस्। >
< start="2569.96" dur="2.363"> जेम्स अध्याय एक, पद १२ >
< start="2573.55" dur="5"> त्यो मानिस धन्यको हो, जसले परीक्षा अन्तर्गत स्थिर रहन्छ, >
< start="2579.84" dur="2.67"> किनभने जब ऊ परिक्षामा पुगेको छ, >
< start="2582.51" dur="5"> उसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। >
< start="2587.82" dur="2.75"> उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई वचन छ। >
< start="2590.57" dur="0.833"> मलाई फेरि यो पढ्न दिनुहोस्। >
< start="2591.403" dur="2.057"> तपाईले यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु भएको म चाहन्छु। >
< start="2593.46" dur="5"> त्यो मानिस धन्यको हो, जसले परीक्षा अन्तर्गत स्थिर रहन्छ, >
< start="2598.84" dur="3.36"> कसले कठिनाइहरू सम्हाल्छ, >
< start="2602.2" dur="2.12"> जस्तो स्थिति हामी अहिलेमा छौं। >
< start="2604.32" dur="3.67"> त्यो मानिस धन्यको हो, जसले धैर्य धारण गर्छ, जसले धैर्य धारण गर्दछ, >
< start="2607.99" dur="3.87"> उहाँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ, जो परीक्षाहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ। >
< start="2611.86" dur="3.12"> किनभने जब ऊ परिक्षामा उभिन्छ, बाहिर आउँछ >
< start="2614.98" dur="2.72"> पछाडि, यो परीक्षण अन्तिम हुनेछ। >
< start="2617.7" dur="1.4"> यसको अन्त छ। >
< start="2619.1" dur="2.07"> तपाईं सुरुnelको अर्को छेउमा आउनुहुनेछ। >
< start="2621.17" dur="4.41"> तपाईंले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नुहुनेछ। >
< start="2625.58" dur="3.38"> ठिक छ, मलाई के पनि थाहा छैन कि यसको मतलब के हो, तर यो राम्रो छ। >
< start="2628.96" dur="2.7"> जीवनको मुकुट जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ >
< start="2631.66" dur="2.373"> उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई। >
< start="2635.73" dur="2.32"> रमाइलो गर्न तपाईको छनौट हो। >
< start="2638.05" dur="2.92"> यो परमेश्वरको छनौटमा भरोसा गर्न तपाईको छनौट हो >
< start="2640.97" dur="1.72"> सन्देह गर्नुको सट्टा। >
< start="2642.69" dur="4.21"> तपाईंको अवस्थाबाट तपाईंलाई सहयोगको लागि बुद्धिको लागि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। >
< start="2646.9" dur="3.23"> र त्यसपछि विश्वासको सहनको लागि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। >
< start="2650.13" dur="2.27"> र भन्नुहोस्, भगवान, म हार मान्दिन। >
< start="2652.4" dur="1.793"> यो पनि पास हुनेछ। >
< start="2655.329" dur="2.111"> कसैलाई एकचोटि सोधिएको थियो, तपाईको मनपर्ने के हो? >
< start="2657.44" dur="0.833"> बाइबलको पद >
< start="2658.273" dur="1.297"> भने, यो भयो। >
< start="2659.57" dur="1.273"> र त्यसोभए तपाईंलाई किन यो पद मन पर्छ? >
< start="2660.843" dur="2.687"> किनभने जब समस्याहरू आउँदछन्, म जान्दछु तिनीहरू बस्न आएका छैनन्। >
< start="2663.53" dur="1.194"> तिनीहरू पारित भए। >
< start="2664.724" dur="1.116"> (चकल्स) >
< start="2665.84" dur="2.88"> र यो विशेष अवस्थामा यो सत्य हो। >
< start="2668.72" dur="3.983"> यो रहन आउँदैन, यो बित्न आउँदैछ। >
< start="2673.56" dur="2.24"> अब, म यो विचारबाट नजिक हुन चाहन्छु। >
< start="2675.8" dur="3.77"> एक संकट मात्र समस्या पैदा गर्दैन। >
< start="2679.57" dur="3.23"> यसले प्राय: तिनीहरूलाई प्रकट गर्दछ, प्राय: तिनीहरूलाई प्रकट गर्दछ। >
< start="2682.8" dur="4.563"> यो संकटले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा केही क्र्याकहरू प्रकट गर्न सक्छ। >
< start="2688.77" dur="2.76"> यो संकटले केहि क्र्याक्स प्रकट गर्न सक्छ >
< start="2691.53" dur="1.823"> परमेश्वरसँग तपाईंको सम्बन्धमा। >
< start="2694.26" dur="5"> यो संकटले तपाईंको जीवनशैलीमा केही क्र्याकहरू प्रकट गर्न सक्दछ, >
< start="2699.29" dur="2.593"> कि तपाईं तरिका आफैंलाई धेरै कठिन धकेल्दै हुनुहुन्छ। >
< start="2702.949" dur="3.181"> र त्यसैले भगवान तपाईं संग कुरा गर्न को लागी तयार हुनुहोस् >
< start="2706.13" dur="5"> तपाईको जीवनमा के परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, ठीक छ? >
< start="2711.45" dur="1.7"> यस हप्ताको बारेमा तपाईले सोच्न म चाहान्छु। >
< start="2713.15" dur="3.44"> र मलाई तपाईलाई केहि व्यावहारिक चरणहरू दिनुहोस्, ठीक छ? >
< start="2716.59" dur="2.47"> व्यावहारिक चरणहरू, पहिलो, म तपाईंलाई चाहन्छु >
< start="2719.06" dur="5"> यो सन्देश सुन्नको लागि कसैलाई प्रोत्साहित गर्न। >
< start="2724.55" dur="1.25"> के तपाईं त्यो गर्नुहुन्छ? >
< start="2725.8" dur="3.603"> के तपाईं यो लिंकलाई पास गर्नुहुनेछ र मित्रलाई पठाउनुहुनेछ? >
< start="2729.403" dur="3.337"> यदि यसले तपाईंलाई प्रोत्साहित गरेको छ भने, यसलाई पार गर्नुहोस्, >
< start="2732.74" dur="2.3"> र यस हप्ता एक प्रोत्साहनकर्ता बन्नुहोस्। >
< start="2735.04" dur="4.84"> तपाईको वरपरका सबैलाई यस संकटको बेला प्रोत्साहन चाहिन्छ। >
< start="2739.88" dur="1.779"> त्यसोभए उनीहरूलाई लिंक पठाउनुहोस्। >
< start="2741.659" dur="5"> दुई हप्ता अघि जब हाम्रो क्याम्पसमा चर्च थियो, >
< start="2747.52" dur="3.11"> लेक वन र हाम्रो सबै अन्य क्याम्पसहरूमा सेडलब्याकमा, >
< start="2750.63" dur="3.53"> करीव ,000०,००० मानिसहरूले चर्चमा देखाए। >
< start="2754.16" dur="4.14"> तर यो पछिल्लो हप्ता जब हामीले सेवाहरू रद्द गर्नुपर्‍यो >
< start="2758.3" dur="1.87"> र हामी सबैले अनलाइन हेर्नुपर्‍यो, मैले भने, >
< start="2760.17" dur="3.38"> सबै जना तपाईंको सानो समूहमा जान्छन् र छिमेकीहरूलाई आमन्त्रित गर्छन् >
< start="2763.55" dur="2.94"> र तपाईंको साथीहरूलाई तपाईंको सानो समूहमा आमन्त्रित गर्नुहोस्, >
< start="2766.49" dur="0.95"> हामीसँग १1१,००० थियो >
< start="2767.44" dur="5"> हाम्रो घर को ISPs सेवा मा जडान भयो। >
< start="2776.3" dur="3.41"> यसको मतलब साढे पाँच लाख मानिस हुन सक्छन् >
< start="2779.71" dur="1.96"> पछिल्लो हप्ताको सन्देश हेरियो। >
< start="2781.67" dur="3.04"> एक आधा लाख मानिस वा अधिक। >
< start="2784.71" dur="3.63"> किन, किनकि तपाईंले अरू कसैलाई हेर्न भन्नु भएको थियो। >
< start="2788.34" dur="4.56"> र म तपाईंलाई शुभ समाचारको साक्षी हुन प्रोत्साहित गर्न चाहन्छु >
< start="2792.9" dur="2.79"> यस हप्ता विश्वमा कि तपाईंलाई सख्त समाचार चाहिन्छ। >
< start="2795.69" dur="1.4"> मानिसहरूले यो सुन्नु पर्छ। >
< start="2797.09" dur="1.18"> लिंक पठाउनुहोस्। >
< start="2798.27" dur="5"> मलाई लाग्छ हामी यस हप्ता एक लाख मानिसहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छौं >
< start="2803.29" dur="3.8"> यदि हामी सबै सन्देशमा पास गर्छौं भने, ठीक छ? >
< start="2807.09" dur="3.16"> नम्बर दुई, यदि तपाईं सानो समूहमा हुनुहुन्छ भने हामी सक्दिनौं >
< start="2810.25" dur="3.45"> कम्तिमा यस महिनामा भेट्न सक्षम हुनुहोस्, त्यो निश्चितको लागि हो। >
< start="2813.7" dur="3.95"> र त्यसैले म तपाईंलाई भर्चुअल बैठक सेट अप गर्न प्रोत्साहित गर्दछु। >
< start="2817.65" dur="1.79"> तपाईंसँग एक अनलाइन समूह हुन सक्छ। >
< start="2819.44" dur="0.97"> तपाईं त्यो कसरी गर्नुहुन्छ? >
< start="2820.41" dur="2.63"> ठिक छ, त्यहाँ त्यहाँ उत्पादनहरू जूम जस्तै छन्। >
< start="2823.04" dur="2.52"> तपाई त्यो जाँच गर्न चाहानुहुन्छ, जुम, यो सित्तैं हो। >
< start="2825.56" dur="2.56"> र तपाइँ त्यहाँ पुग्न र जूम प्राप्त गर्न सबैलाई भन्न सक्नुहुन्छ >
< start="2828.12" dur="1.74"> तिनीहरूको फोन वा कम्प्युटरमा, >
< start="2829.86" dur="3.58"> र तपाइँ छ वा आठ वा १० व्यक्ति जडान गर्न सक्नुहुन्छ, >
< start="2833.44" dur="3.15"> र तपाईं आफ्नो समूह जूम मा यस हप्ता गर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="2836.59" dur="3.19"> र तपाइँ एक अर्को अनुहार देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै फेसबुक लाइभ, >
< start="2839.78" dur="2.933"> वा यो केहि अरू जस्तै छ, तपाईंलाई थाहा छ, >
< start="2844.84" dur="5"> आईफोनमा के हुन्छ जब तपाईं फेसटाइममा हेर्नुहुन्छ। >
< start="2850.12" dur="1.82"> ठिक छ, तपाई त्यो गर्न सक्नुहुन्न ठूलो समूहको साथ, >
< start="2851.94" dur="2.39"> तर तपाई यो एक व्यक्ति संग गर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="2854.33" dur="3.52"> र त्यसैले प्रविधि मार्फत एक-अर्काको अनुहार आमने सामने जानुहोस्। >
< start="2857.85" dur="2.66"> हामीसँग अब टेक्नोलोजी छ जुन उपलब्ध थिएन। >
< start="2860.51" dur="3.59"> एउटा सानो समूह भर्चुअल समूह को लागी जुम जाँच गर्नुहोस्। >
< start="2864.1" dur="1.17"> र वास्तवमा यहाँ अनलाइन >
< start="2865.27" dur="1.85"> तपाईले केहि जानकारी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। >
< start="2867.12" dur="3.244"> नम्बर तीन, यदि तपाईं सानो समूहमा हुनुहुन्न भने, >
< start="2870.364" dur="4.096"> म तपाईंलाई यस हप्ता एक अनलाइन समूहमा जान मद्दत गर्दछु, म गर्दछु। >
< start="2874.46" dur="2.33"> तपाईले गर्नुपर्ने सबै मलाई ईमेल गर्नुहोस्, >
< start="2876.79" dur="3.225"> PastorRick@saddleback.com। >
< start="2880.015" dur="4.815"> पादरी रिक @ काठी, एक शब्द, SADDLEBACK, >
< start="2884.83" dur="2.81"> saddleback.com, र म तपाईंलाई जडान गराउँछु >
< start="2887.64" dur="2.57"> एक अनलाइन समूहमा, ठीक छ? >
< start="2890.21" dur="2.79"> त्यसोभए यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि यदि तपाईं साडलब्याक चर्चको एक भाग हुनुहुन्छ >
< start="2893" dur="2.84"> तपाइँको दैनिक समाचार पत्र पढ्न जुन म पठाउँदै छु >
< start="2895.84" dur="2.03"> हरेक दिन यो संकटको समयमा। >
< start="2897.87" dur="2.1"> यसलाई "सेड्लब्याक एट होम" भनिन्छ। >
< start="2899.97" dur="3.5"> यसका सुझावहरू छन्, यसले प्रोत्साहनजनक सन्देशहरू पायो, >
< start="2903.47" dur="2.14"> यो समाचार छ कि तपाइँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="2905.61" dur="1.56"> धेरै व्यावहारिक कुरा। >
< start="2907.17" dur="2.17"> हामी प्रत्येक दिन तपाइँसँग सम्पर्कमा रहन चाहन्छौं। >
< start="2909.34" dur="1.32"> "Homeddadback" प्राप्त गर्नुहोस्। >
< start="2910.66" dur="2.69"> यदि मसँग तपाईंको ईमेल ठेगाना छैन भने, >
< start="2913.35" dur="1.42"> त्यसोभए तपाईले बुझ्नुहुन्न। >
< start="2914.77" dur="2.46"> र तपाईं मलाई तपाईंको ईमेल ठेगाना ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ >
< start="2917.23" dur="4.41"> PastorRick@saddleback.com, र म तपाईंलाई सूचीमा राख्नेछु, >
< start="2921.64" dur="2.37"> र तपाईले दैनिक जडान पाउनुहुनेछ, >
< start="2924.01" dur="3.76"> दैनिक "होम मा काठी" न्यूजलेटर। >
< start="2927.77" dur="2.09"> मैले प्रार्थना गर्नु अघि म नजिक हुन चाहन्छु >
< start="2929.86" dur="2.15"> फेरि भनेर म तिमीलाई कती माया गर्छु। >
< start="2932.01" dur="1.72"> म हरेक दिन तपाईंको लागि प्रार्थना गर्दैछु, >
< start="2933.73" dur="1.9"> र म तपाइँको लागि प्रार्थना गरिरहने छु। >
< start="2935.63" dur="2.68"> हामी यस मार्फत प्राप्त गर्नेछौं। >
< start="2938.31" dur="2.33"> यो कथाको अन्त्य होइन। >
< start="2940.64" dur="3.4"> परमेश्वर अझै आफ्नो सिंहासनमा हुनुहुन्छ, र परमेश्वरले यसलाई प्रयोग गर्नुहुने छ >
< start="2944.04" dur="4.16"> तपाईंको विश्वास बढाउन, मानिसहरूलाई विश्वासमा ल्याउन। >
< start="2948.2" dur="1.8"> अनि कसलाई थाहा छ के हुन्छ। >
< start="2950" dur="3.07"> हामी यी सबैबाट आध्यात्मिक पुनरुद्धार पाउन सक्छौं >
< start="2953.07" dur="2.66"> किनकि प्रायः परमेश्वरतर्फ फर्कन्छ >
< start="2955.73" dur="1.87"> जब उनीहरू कठिन समयमा गुज्रिरहेका छन्। >
< start="2957.6" dur="1.09"> मलाई तिम्रो लागि प्रार्थना गरौं। >
< start="2958.69" dur="1.66"> बुबा, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु >
< start="2960.35" dur="1.48"> कसले अहिले सुनिरहेको छ। >
< start="2961.83" dur="5"> हामी जेम्स अध्याय १ को सन्देश बाँच्न सक्छौं, >
< start="2967.39" dur="2.78"> पहिलो छ वा सात पदहरू। >
< start="2970.17" dur="4.25"> के हामी समस्याहरू आउन सक्छ भनेर जान्न सक्छौं, ती हुन जाँदैछन्, >
< start="2974.42" dur="5"> तिनीहरू भ्यारीएबल हुन्, तिनीहरू उद्देश्यपूर्ण छन्, र तपाईं सक्नुहुनेछ >
< start="2979.81" dur="2.41"> हाम्रो जीवनको लागि ती राम्रो प्रयोग गर्नुहोस् यदि हामी तपाईंलाई विश्वास गर्छौं। >
< start="2982.22" dur="1.49"> हामीलाई श doubt्का गर्न सहयोग गर्नुहोस्। >
< start="2983.71" dur="4"> हामीलाई रमाउन, अनुरोध गर्न प्रभु, >
< start="2987.71" dur="3.53"> र आफ्ना प्रतिज्ञाहरू सम्झन। >
< start="2991.24" dur="3.45"> र म सबैका लागि प्रार्थना गर्दछु कि उनीहरूको स्वस्थ हप्ता होस्। >
< start="2994.69" dur="2.87"> येशूको नाममा, आमेन। >
< start="2997.56" dur="1.07"> भगवानले तपाईलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, सबैलाई। >
< start="2998.63" dur="1.823"> यो अरू कसैलाई दिनुहोस्। >